Isifundo: I-Jailbreak iPhone Firmware 3.1.3 nge-Sn0wbreeze v1.3 (Windows) | IPhone iindaba
OLUHLAZIYIWEYO: Namhlanje ekuseni IH8sn0w ikhuphe ingxelo entsha ye I-Sn0wbreeze v1.4, ukwenza I-firmware yeJailbreak 3.1.3 I-iPhone ivuliwe Windows.
sn0wmoyaIsoftware ekuvumela ukuba wenze ifayile ye- isiko firmware ukwenza i Jailbreak kwisixhobo sethu.
Ngaphambi kokwenza nantoni na kuya kufuneka ufunde ezi zinto ziqwalaselweyo DevTeam ngaye Jailbreak kwi I-3.1.3 yeFirmware:
I-Fimware 3.1.3 Jailbreak kwi-iPhone kunye ne-iPod Touch
I-Sn0wbreeze, isebenza kuphela kwiJailbreak OS 3.1.3, Lowo ufuna ukukhupha akayisebenzisi, Ubuncinci okwangoku…
Windows XP, Vista, 7 (32 okanye 64 bit)
Isakhelo se-NET 3.5
I-Firmware yokwenene 3.1.3 ye-iPhone, enokukhutshelwa apha:
Inguqulelo yamva nje ye-iTunes, enokukhutshelwa apha:
I-3GS ye-iPhone (nge-iBoot yakudala)
Ukuze wazi i iBoot Ungayibona kwesi sifundo se-f0recast:
I-iPod Touch 2G (hayi iMC)
Qhagamshela iphone kwaye uvumelanise iphone kunye Itunes ukubuyisa kamva abafowunelwa, ikhalenda, usetyenziso kwiVenkile yeApple ..., kunye nekopi yogcino lwezicelo zeCydia ezigcinwe njengomfowunelwa.
1. Vula iSn0wbreeze.
Xa usebenzisa iWindows Vista okanye iWindows 7, kuya kufuneka uqalise usetyenziso kwi "Indlela yoMlawuli"Ukwenza oku, cofa iqhosha lasekunene kwi icon kwaye ukhethe ukhetho "Phumeza njengomlawuli".
2. Qhagamshela i-iPhone i-USB kwiPC.
3. Isikrini sokuqala sesicelo siya kuvela - Khetha "KULUNGILE".
4. Isikrini sesibini sesicelo siya kuvela - Khetha i "utolo" ukuya kwinqanaba elilandelayo.
5. Uya kuba nakho ukukhetha phakathi kwemowudi elula kunye nemowudi yengcali: khetha "Imo yengcali" kwaye uqhubeke.
6. Isikrini esitsha siza kubonakala sikhetha i-firmware. Cofa apha "Vavanya" y "Khetha i-firmware 3.1.3", ekhutshwe ngaphambili.
Kuya kufuneka uyikhangele apho ibigcinwe khona
Cofa ku "Vula".
Isicelo ngokuzenzekelayo sibhaqa isixhobo kwaye siqhubeke
7. Esi sikrini sitsha sinomdla kakhulu, ukwenza ngokwezifiso i-firmware, khetha kwi "Ngokubanzi" kwaye uqhubeke.
8. Isikrini esilandelayo siza kuvela:
«NO» khetha «Yenza i-iPhone isebenze» kwiiFowuni ze-3G / 3GS ezingatshixwanga mveliso (ezinje nge-Italiyane, eyam…) kunye nezo zisebenzisa umthengisi osemthethweni we-iPhone.
«EWE» Khetha «Yenza i-iPhone isebenze» kwi-iPhone 2G / 3G / 3GS engasebenzisi umphathi osemthethweni we-iPhone.
Abanye "2" ongakhetha kuzo ungayikhetha
Ubungakanani besahlulelo seengcambu kukungcamla, kodwa ubungakanani obuphawula ukusuka 750 MB ingaphezulu ukwanele kuzo zonke ii-iPhones.
Siza kubona ibinzana elibomvu elisixelela loo nto I-Sn0wbreeze ayiyihlaziyi i-Baseband, iya kugcina i-firmware ye-3.1.3 nge-3.1.2 Baseband: i "05.11.07".
Kulabo bane-iPhone 3G / 3GS ene-Baseband elingana okanye engaphantsi kwe-04.26.08, ndingakucebisa ukuba ungayifaki le Firmware, ukuze ube nethemba elingcono ngekamva.
I-2G iPhones azinangxaki ye-Baseband, ke ngoko banokuzihlaziya kule firmware ngaphandle kwengxaki.
Nje ukuba oku kugqityiwe kugqityiwe, sikhetha utolo kwaye siye kwiscreen esilandelayo
9. Ngoku kufuneka ukhethe indlela yokuvula i-iPhone, kwesi sikrini kufuneka ukhethe indlela:
Iscreen esinye sele sisixelela ukuba yeyiphi ifoto oza kuyikhetha:
Phezulu kwi-iPhone 3G / 3GS
Ngaphantsi kwe-iPhone 2G.
Njengoko uza kubona kwisicatshulwa, kuya kufuneka unxibelelwano lwe-intanethi olusebenzayo ukuze iBootloaders yeBootNeuter ikhutshelwe ngokuzenzekelayo.
Khetha utolo kwaye uqhubeke.
10. Isikrini esitsha sokukhetha umphathi wepakeji ukuba ayifakele: khetha phakathi kweCydia kunye / okanye iLokhe ifowuni yakho.
Ngokwam ndikhetha kuphela iphakheji yokuqala kwaye ndiqhubeke.
11. Isikrini esitsha sokukhetha iipakeji eziza kufakwa kwi-firmware:
Imithombo yolondolozo lwemithombo yoluntu sele ithwele imithombo yesiqhelo.
Inketho yesibini ayisebenzi
Ngokucacileyo, ungayihoya yonke into kwaye uqhubeke.
12. Ke kwiscreen esitsha onokukhetha kuso ukuba ufuna ukusebenzisa:
I logo yelogo yesiqhelo.
Ilogo yesiko yeMowudi yokuBuyisa.
Okanye sinokukhetha ukwenza imowudi eneenkcukacha, esivumela ukuba sigcine yonke into elayishwe ekuqaleni kwenkqubo yokusebenza.
Ukuba ufuna ukutshintshela kwilogo yesiko, khumbula ukuthobela ezi zinto zilandelayo:
Iifayile zePNG zamkelwe kuphela ngeepikseli ezingama-320 × 480.
Ubungakanani obukhulu be logo ye-boot kufuneka ibe yi-100 Kb.
Kuya kufuneka ibe ne-pixel enye ebonakalayo.
13. Lonke ulwenziwo lwenziwe.
Ngoku sinokuqhubeka nokwenza i-firmware, ngokukhetha: "Yenza i-IPSW" kwaye kamva utolo luqhubeke.
14. Emva kwemizuzu embalwa eyimfuneko yokwenza umsebenzi odlulileyo, i-firmware yesiqhelo iya kwenziwa kwaye singasivala isicelo okanye siqhubeke ngokukhawuleza ukufaka i-firmware.
15. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke i-iPhone kwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye kwimo ye-DFU ngokuxhomekeke kwimeko.
Cima ngokupheleleyo iPhone ngelixa uqhagamshele kwikhompyuter
Khetha ngaxeshanye Iqhosha lasekhaya + Amandla iqhosha durante Imizuzwana ye10
Ukukhupha iqhosha lamandla ngelixa ubambe phantsi Iqhosha lasekhaya, kude kuvele umyalezo othi "I-iPhone yafunyanwa ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo".
I-iPhone eqhagamshelwe kwikhompyuter nakwi-iTunes icinyiwe
Khetha ngaxeshanye Iqhosha lasekhaya + Amandla iqhosha de ikhebula kunye ne icon ye-iTunes ivele kwiscreen.
Ngexesha lokusebenza, i-iPhone iya kucima amaxesha ambalwa. Qhubeka ucofe amaqhosha ...
Kude kuvulwe i-iTunes kwaye umyalezo wesilumkiso uya kubonakala ukukuxelela loo nto "I-iPhone iqhagamshelwe kwimowudi yokubuyisela".
Qinisa isitshixo sokutshintsha (kwiWindows) ngaxeshanye nokubuyisela kwi-iTunes. Iqhosha lokushiya limelwe lutolo oluchaziweyo olukhombe phezulu (⇧).
Iwindow iya kuvela ukukhangela ifayile ekhutshelweyo, ikhethiwe kwaye ukubuyiselwa kuqala.
Emva kwemizuzu embalwa uya kuba ne-iPhone ehlaziyiweyo I-Firmware 3.1.3 kunye neJailbreak eyenziwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isifundo: Jailbreak iPhone Firmware 3.1.3 kunye Sn0wbreeze v1.3 (Windows)
Izimvo ezi-325, shiya ezakho
Ndicinga ukuba kungcono ndikulinde ukuba ulayishe iiFirmwares zesiko… NdiyiBago kakhulu!… Lol
Emva kokuphuculwa kwinguqulelo 3.1.3, ngaba iinkqubo ze-cydia ezifakiweyo zisaza kusebenza? umzekelo isendlalelo, iprotect, irealsms, kunye nazo zonke ezo zinto sizifaka kwi-cydia.
Omnye umbuzo, ngaba sikhona isiziba ukuze i-iTunes ingazicimi usetyenziso olukhutshelweyo kwaye zafakwa ngokwahlukeneyo?
Ukuba kwii-3gs ziya kusinika impazamo eyi-16xxx, ke silungisiwe, nge-ireb windows abaqhubi balayishwe ngaphandle kwejele okanye nantoni na, uya kuba ne-custon kuphela kwi-desktop na ngaphezulu
Ukuphambana okuhle !! Sele ndiyikhuphile ngoku. Ungandixelela igama lesiziba sokudlala imidlalo ekhutshelweyo? Okanye akukabikho !!
UJuan Fran sitsho
Molweni zihlobo kwaye ndiyizamile kwi-3G XNUMXG yam nge-iBoot endala kwaye i-firmware ifakwe kakuhle kwi-iPhone kodwa yakuba ifakiwe xa kufuneka ivuliwe iyabanjwa kwi-apile isithi ikhuphe i-firmware kabini
Phendula kuJuan Fran
Zimbini kuphela izinto ezingandicacisanga konke konke.
Nokuba sele ndine-firmware 3.1.3 efakwe kwi-iphone, kuya kufuneka ndikhuphele kwakhona into oyibekayo kwiwebhu ukuyibhala ngaphezulu? Kwaye enye into, isihloko se-Iboot, andazi ukuba ndingajonga njani nokuba ndifunda isifundo, kodwa bendingenangxaki ngeloxesha ngenguqulo 3.1.2 ekwenzeni i-jailbreak nge-cydia yebhetri okanye nantoni na enjalo , ithiyori ndinayo "elungileyo" iboot kwaye ndingasisebenzisa esi sixhobo??, molo kwaye ndiyabulela.
umntu usombulule ingxaki ye-wifi? Andazi ukuba ndenzeni ubisi, ibhetri iphela ngokukhawuleza okukhulu
Ayisebenzi kum xa ndibeka i-IPSW ye-iPod Touch 1G
Phendula ku Saanti
Ndicinga ukuba kuya kufuneka ucacise ngcono indlela yokulayisha isiko elenziweyo, ukuze kungabikho mpazamo ye-16xxx
Ngemvume ka-Berllin kunye neNkampani ...
Ndiyakuxelela, ngokuqinisekileyo ndiza kuyenza ngomso, kude kube namhlanje andikabinalo ixesha kwaye khange ndikwazi ukuyenza ... ndinayo ne-3G 16gb Movistar yakho, eqinile 3.1.2 ...
Okokuqala ... Into ye-cydia onokuyifaka iPkgBackUp efumaneka kwi-BigBoss repo.
Into eyenziwa yiPkgBackUp kukwenza umnxeba kwincwadi yemfonomfono, emva koko uyangqamanisa neTunes kwaye iya kugcinwa (umfowunelwa uya kubizwa ngokuba nguPkg BackUp).
Nje ukuba ubuyisele kwaye uphuke intolongo, konke okufuneka ukwenze kukuphinda ufake iPkgBackUp, emva koko uvumelanise ne-iTunes kwaye emva kokufaka isicelo ucofe ku "Buyisela", uya kufumana zonke iimpazamo kunye neephakeji kwi-cydia.
Okwesibini ... Ngaphambi kokwenza nantoni na, ungqamanisa ne-iTunes, iyakwenza ukhuphelo lwabafowunelwa, ii-sms, njl.njl onazo kwisixhobo (hayi iLitye kunye neCydia ...)
Okwesithathu ... Ungayibona i-baseband kwiiSetingi / Ngokubanzi / kuLwazi kwaye apho ithi Firmware yemodem, ngokuqinisekileyo uya kuyifumana 05.11.07
Ke xa uyenzile intolongo, kuya kufuneka ungene kwi-cydia, ubeke i-Hackulo repo kwaye ufake i-AppSync 3.1
Salu2 kwaye ndiyathemba ukuba ulwazi luya kukunceda
Ngempazamo 16xxx unokukhuphela inkqubo ebizwa ngokuba yiReb, uyiqhube, ukhethe iphone yakho kwaye yiyo, awusayi kuphinda ube nayo ingxaki.
molo xa ndivula i-sn0wbreeze ye-2G, i-itunes iyavula, hayi inkqubo oyitshoyo.
Molweni zihlobo, ndine-Iphone 3g 3.1.2 ethengwe ngoDisemba ophelileyo kunye nekhontrakthi evela eMovistar, ndiyaphule entolongweni ukuze ndikwazi ukukhuphela izinto kwiCydia, njl.njl. Inyaniso kukuba ihamba ngokumangalisayo, kwaye ndiyilungiselele ukuthanda kwam, ngoko kuyothusa ukuhlaziya kwi-firmware entsha kuba ndiyabona ukuba ayinazinto zingcono kunangaphambili ... kwaye iyoyikisa ukuphulukana nazo zonke izicelo ezikhutshiweyo kwi-cydia kunye nokufaka xa uhlaziya. Kungenxa yoko le nto ndikubuza, ngaba kufanelekile ukuba uyihlaziye okanye ndiyathemba ukuba i-firmware entsha iza kukhutshwa kamva kunye nezinto ezingcono? Ukuba ekugqibeleni ndithathe isigqibo, ndingaphulukana nezo zinto "zokuphanga"? Bekuza kufuneka ndenze ntoni ukuze ingenzeki? Enye into kukuba ndazi njani ukuba ndinayo ibaseband? Isifundo sihle kakhulu, uyicacisa yonke into kakuhle, kodwa ndinoloyiko olusengqiqweni lokuba akasiphathi kakuhle isifundo ... hehehe. Ihug Iphoneros !!!
IREB ikhupha abaqhubi kwi-pc kwaye ii-3gs azibonakali kwi-IREB ke ngaphambi kokuba unike ingcebiso qiniseka ngento oyithethayo, uthetha izinto ezingekhoyo. Yitsho apha onee-3gs kwaye ulayishe ngokufanelekileyo isiko kwi-itunes
NdinguMlawuli wejelo le #iphone le-irc-hispano kunye nabo bonke abasebenzisi abayizamileyo, akukho namnye oyifumeneyo, nokuba nge-IREB okanye ngaphandle kwe-IREB
oku kulungisa impazamo ye-wifi ???
Enkosi eBerlin kodwa ukuba umntu unokubeka isipili okanye asivuse kwakhona ngekhonkco le-Sn0breeze elingasebenziyo?
Hayi berlin le iyaphuma, lungisa nceda….
Ngaba okwangoku akukho ndlela yokuya ejele ngaphandle kokulahleka kwedatha? (Oko kukuthi, ngaphandle kokwenza ukubuyisela). Kukutsala ukubeka wonke umculo kwakhona xD
lungisa ikhonkco lokukhuphela kwiqhwa ...
ukuyinika i-firmware iyavela… ..
UJuan Carlos bendibonisile ukuba iposti ezimbalwa ngaphezulu kwejee ndicinga ukuba indawo yethu yomhlobo kufuneka isuse olu lwazi kuba alusebenzi
Mholweni. Ndine-iPhone 3G fw 3.1.2 engekho mthethweni kwaye bendihlala ndiyiphula kwaye ndiyikhupha nge-firmware yesiko. Umbuzo ovele kwezi ntsuku kukuhlaziya ngokuthe ngqo kwi-iTunes, kodwa ukhetho lokubeka nayiphi na i-firmware. Kule meko ndifuna ukubeka u-3.1.2 wantlandlolo oziswa yi-baseband 05.11.07 (ekucacileyo ukuba ayisiyiyo ehamba nefw 3.1.3). Okwangoku ndine-04.26.08. Konke oku kuye kwavela kuba ndibona ukuba ikhompyuter icotha kakhulu, phofu ngalo lonke ixesha ndiyifumana ibanjwa ndiyifumana icotha, kwaye andinanto ifakwe. Ucebisa ntoni? Hlaziya ku-3.1.2 nge-fw yoqobo kunye nokuqhekeka kwejele nayo yonke enye into nge-Blackra1n?, Okanye uqhubeke no-3.1.2 kunye nemodem 04.26.08?. Ukubulisa.
Kukho into engalunganga ngale nto ndinayo i-3gs 32gb kwaye yonke into ifakiwe kodwa xa ifuna ukuqala ihlala ihleli kwiapile kwaye ingasuki apho, nokuba ngokwe-iTunes ifaka zonke iinkqubo, kodwa na de na… mna buyela ku 3.1.2 wam
Akukho mntu ufaka nantoni na enengxaki
UKUJONGA KUKADANIEL NDIHLAZIYA NGAYO NGOKUQHELEKILEYO KODWA NDIYIKHUPHISILE I-FIRMWARE 3.1.2 KWELINYE IPHEPHA NDAYE NDENZA I-JAILBREAK NE-BLACKRA1N NDAYE NDIYIVALE NGE-SNOWBREZEER YAYINGABONAKALIKI YONKE KAKUHLE KUNYE NOKUKHULULEKILEYO NJENGOKO KUSENJALO NGOKO 'T KHUPHELA ENYE NJENGOKO UHLALA UKUKHUTSHELWA YENZE UZOKUBONA UKUBA IWALAAA YENZA UBUGQIBELA ENDITHEMBEKILEYO NDIYE NDABANCEDA KWINTO ETHILE
Kwaye kunokwenzeka njani ukuba ubuyele ku-3.1.2?
Lungisa ikhonkco le-sn0wbreeze !!! Ndifumana utyikityo lokukhuphela, enkosi! Ndifuna ukuzama le ndlela okomzuzu ukuze ndibone ukuba ndingayenza na i-jailbreak.
Namhlanje sonke sizakonwaba ngovuyo ezintliziyweni zethu, kunye nam sonke ukucula isingqisho soku kuqhushumba, ukuvuyisana, ukuvuyisana, ube nexesha elimnandi, kwaye siza kudanisa, sihambise isinqe sakho kwaye sihambise neenyawo zakho. kwaye uthathe uhambo oluncinci, ulibale ngoxinzelelo, gungqisa isinqe sakho kwaye uyilandele ngaphandle kokuma, ukuba awusweli ebomini, uthando okanye ulonwabo, tururururutututuru turururururutututuru
UFernando Camilo Cantura Bernal sitsho
molo bahlobo bangoku be-iPhone:
jonga ndine-iPhone 3GS ene-IBOOT 359-3 kwaye ngokungenangqondo ndiyihlaziye nge-iTunes kwi-firmware 3.1.3, ndiqale kuGoogle ndafumana inkqubo ye-Sn0wbreeze 1.3 abathi isetyenziselwa ukuqhekeka kwejele,
Ndiyikhuphele kunye ne-firmware 3.1.3 endicebisayo kwaye ndaqhubeka nenkqubo kodwa akukho nto iphone yam iyaqhubeka, indinika isibhengezo sokufaka i-sim yefowuni.
Ndizombulela ngokufudumeleyo umntu onokuthi andincede ekulungiseni iphone yam.
kwaye ndingavuya ukuba ungandiphendula nge-imeyile yam:
Phendula uFernando Camilo Cantura Bernal
kweli nqaku kubonakala ngathi inokukhutshwa kuye nawuphina umqhubi nakwenye entsha engeyiyo: -YI ndiyibambile okanye ingakhululwa isebenzise abanye abaqhubi?
Kulabo banengxaki yokukhuphela i-sn0wbreeze, khuphela kwiwebhusayithi esemthethweni ye-ih8sn0w
Ise yiza undixelele, kodwa le datha ibonakala inge-iPhone 2g, ngalo lonke ixesha ndivula i-icon ivula ngqo kwi-iTunes, ndingayisebenzisa njani ikhephu kwi-iPhone 3GS 32GB yam? Enkosi, ndifuna ukwazi ukuba ndiyivula njani ifestile yekhephu kwi3gs 3.1.3
molo xa ndivula i-sn0wbreeze nomlawuli, ii-itunes ziyavula kwaye hayi inkqubo.
akukho funka kwiphepha le-ih8sn0w nantsi ke le firmware ye-iphone 2g
ukuba kukho umntu onesiporho sn0 nceda usibeke ... enkosi
UCamilo Cantura sitsho
Molo kwakhona, okokuqala ndiyakuxelela ndine-3 gb iPhone 16Gs ene-IBOOT 359-3, ndiyivuselele ngengozi ngeTunes kwi-firmware 3.1.3, kwaye indicela ukuba ndifake iSono sokuqala. Ndiyenzile yonke inkqubo yokuqhekeka kwejele nge-Sn0wbreeze 1.3 i-verbatim kunye ne-iPhone kwimo ye-DFU, kodwa ndinengxaki yokuba xa ndifika kwiscreen esithi I-CUSTOM BOOT LOGOS indibuyisela kwiscreen esinamaxande ama-6 apho ikhethwe GENERAL Ukusuka apho ihlala ifana, ndizamile ngaphezulu kwamaxesha e-10 kodwa akukho nto, kwaye ngoku ndiyathandabuza ukuba ndiza kuba nakho na ukuvuselela i-iPhone yam kwakhona.
Ukuba umntu angandiphendula kwaye asebenzisane nesisombululo, ndiya kumbulela ngokusuka entliziyweni yam, uThixo akusikelele
Imeyile yam: kamilin033@hotmail.com
Phendula kwi-camilo cantura
Kuya kufuneka uphinde uzifake
Ndicinga ukuba isasebenza ngokufanayo: APPSinc nge-OS3.1 nganye
Kuya kufuneka uyikhuphele ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kunye nekhephu
Xa ijinga kuwe ne-apile, cofa iqhosha laMandla kunye neqhosha lasekhaya, de iphinde iqale kwakhona kwaye ulinde…, ukuba ayibambi kwimizuzu embalwa uyiphinde amatyeli aliqela, kuba ihlala isonjululwa ngaloo ndlela.
Hlala unje, kuba akunakufumana nto ngokuhlaziya
Ligama lale firmware usebenzisa i-sn0wbreeze, ukuba awuyithandi ungabeka naliphi na igama olifunayo.
Ikhonkco lilungile, ndikhangele nje.
Inokuba nokugcwala kakhulu kwezicelo, kuba zininzi ngexesha elinye
Ngelishwa, impazamo ye-16XX yimpazamo rhoqo, enesisombululo esifanelekileyo kwi-2G nakwi-3G, kodwa kwi-3G, yenye into.
Izisombululo sele kuxoxwe ngazo amaxesha amaninzi kwiBhlog.
Ingxaki nge-3Gs kukuba andinakujonga isisombululo ngokwam, njengakwezinye ii-iPhones.
Kuya kufuneka sifunde kwi-Intanethi ukubona ukuba ikhona na ...
berlin, ndicinga ukuba kukho impazamo, ubeka ikhonkco lokukhuphela kwi-snowbreeze ikhonkco le-firmware eguqulweyo.
molo umbuzo ekupheleni kwayo yonke inkqubo ekhutshwe yi-iphone keda ????
Ndizama ukuyilungisa, andiqondi ukuba kwenzeke ntoni okoko le tutorial yenziwe ngaphambi kwe-2G.
berllin umbuzo kwaye ndiza kuyikhupha njani kodwa ngaphandle kwesidingo se-wifi xq ngelishwa iphone yam yonakele yi-wifi ndiyathetha ukuba unayo i-wifi engwevu "NO WIFI" kwaye ngulombuzo ondiphendulayo kwaye uthixo akusikelele
I-iphone yam 3g 3.1.3 ayivulwanga ayivulwanga
Isebenzile kum, kodwa qinisekisa ukuba ikhonkco le:
bellin unephone enjani ???
Ngale firmware okwangoku ayinakukhutshwa, inokuqhekeka kuphela.
Inye kuphela eshiyekileyo ikhutshiwe yi-2G
kulungile enkosi x ukucacisa kulungile ndithetha ukuba ndifuna ukulinda ukuze ndibone ukuba bayayikhupha na inkqubo entsha eza kukhutshwa
Omnye umbuzo kuwe, ngaba le nkqubo ikusebenzele ngokugqibeleleyo? Ngenxa yokuba ndingakhange ndiyenze, ndisakhuphela iinkqubo ngeli xesha
Enkosi ngokuthatha ingxaki nokuzinikela ekwenzeni oku kuthi, ndiyabulela
Ewe ndiyakuxelela, ndine-3Gb iPhone 16GS ethenga eMovistar, ine-Iboot 359.3 kwaye ndifuna ukwenza iJailbrake kodwa ndifunda amagqabantshintshi angaphambili, akukho namnye kubo okwazileyo ukuyenza, ndenza ntoni? : S
Ukuba umjongile, inkcazo ithi kuphela ngabo bane-iboot endala ngoku abanayo i-iboot endala, jonga ukuba i-iboot yakho indala na, kodwa ndikucimile hahaha UThixo akusikelele mzalwana
Ndiyathetha, nge-jailbkeak ndiza kuba nakho ukudlala imidlalo
I-berlin ... egqibeleleyo .. ikhonkco iyahambelana nekhephu
ngoku ndingathanda ukwazi ukuba iyasebenza kwi-3GS nge-iboot endala ...
NCEDA UNCEDE, NDISISOMBULULA NJANI ISIPHOSO SE-16XXX KWI-IPHONE 3GS, UKUBA IREB AKEKHO KWI-3GS, OKANYE UKUBA KUKHO UKHANGELANA OKANYE OLUNYE UKHETHO.
ENKOSI KUBO BONKE
Ndine-3GS enegumbi lokulala elidala kwaye ndizamile amatyeli ambalwa kwaye xa igqiba ukubuyisela xa uqala kwakhona ayigqithisi ibhloko kwaye ukuba ndiyishiya ithutyana iqala kwakhona.
Nge-firmware yangaphambili bendisebenzisa i-blacra1n kwaye bendingenangxaki
Ucinga ukuba inokuba yintoni?
Ndibuyele ku-3.1.2 ndenziwe nge-sn0wbreeze kwaye yonke into ilungile
Ububuza ukuba kukho umntu oyenzileyo kwii-3gs kwaye ndifunde nje kule post ukuba EWE: Dj_JaB3
Xa ikubuyisela kwiphepha elimakishwe ngokubanzi, kuya kufuneka uphawule:
13. Konke ukwenziwa ngokwezifiso kwenziwe.
Ngoku sinokuqhubeka nokwenza i-firmware, sikhethe: "Yenza i-IPSW" kwaye emva koko utolo luqhubeke.
Ukuba ndiyenzile nge-2G yam
Ubundibuza ukuba ndinantoni ipone. Okwangoku ndine-2G, 3G kunye ne-3G. Hi ndlela leyi, ndine-3G ngentengiso yol ...
Abantu bathi baneengxaki ezininzi kwaye abanako.
Bendingazi ukuba ndikuxelele ntoni na ngokuqinisekileyo, imigca embalwa ephezulu kule ngcaciso ndithi kwelinye inqaku lebhlog, u-Dj_JaB3, ukwenzile, andinakukuxelela ngakumbi ...
Zama ukwenza into ethethwa yi-villadelaniebla, engaphantsi kwezimvo zakho: Faka i-3.1.2 kwaye emva koko iBlackra1n
uBerllin umbuzo wokuba uyinkosi kulese yonke into enomdla kodwa ekugqibeleni xa iphone iphinda iqala kwakhona ayidluli iapile undixelele ukuba kutheni kunjalo ??? Uyabona, ndicacisele indawo endinokuthi ndibeke umlobothi apho ndiyilele ukuvula i-iphone, ndiyathetha, ngoobani ekufuneka beyifakile ikhonkco.Ndingathanda ukuba undinike msn yakho ukuze ukwazi ndincede uThixo akusikelele!
omnye umbuzo berlli ndihlala epanama kwaye umbuzo ngowokuba ndingavula i-iphone yam nge-IMEI ????
Ngokunjalo, yeyiphi inkqubo efanayo kodwa ene-fireware 3.1.2 ???? Kwaye konke okuhle ufuna ukuba ndinqwenele ukuba unganako ne-aser ye-jailbrak ngale nkqubo ukuya kuhlobo 3.1.2 ????
Ngaba iyasebenza kwi-ipod touch 3g?
Ndine-iPhone 3gs16gb ye-mc series kwaye kubonakala ngathi ivela eYurophu kuba i-chip ye-at & t ayenzi ukuba umntu abe ne-chip evela eYurophu ndiyithenga.
Kwenye i-iPhone 3G yonke into isebenze kunye ne-firmware entsha ngaphandle kokuba andinakukwazi ukuphulukana nejele
Kutheni le nto ucebisa ukuba ungasebenzisi le nguqulo ye-jalibreak kwabo kuthi bane-Baseband 04,26,08, ukuba xa ubeka isiko kuyo, ayiyihlaziyi i-baseband?
kuba enye into kukuyihlaziya, kodwa ukuba ayiyihlaziyi, siza kuqhubeka sifana naphambi kokubeka i-jalibreak entsha kuyo, akunjalo?
Into endiyenzileyo ukubuyela ku-3.1.2 ngaphambi kokuba iApple iyeke ukutyikitya kuba ukuba andenzi njalo andizukubakho ngaphandle kwejele.
I-sn0wbreeze kwinguqu yayo yangaphambili isebenze kule firmware (3.1.2)
Ndizamile nge-3gs yam ye-iphone kwaye khange ivumele ukuba ndibeke i-firmware kuyo, indinike impazamo xa ndiyinika ukhetho: (. Nokuba kunjalo, kuya kufuneka silinde esinye isixhobo.
Ndizama ukwenza yonke into yokuqhekeka kwejele kwi3g yam kwi-sn0wbreeze, kodwa xa ndifika kwinxalenye yelogo logo yesiqhelo, ndicinezela utolo kwaye ndibuyiselwe kwiscreen sokukhetha enye yezi ndlela zilandelayo ndizenzayo? ikhona into engahambi kakuhle?
mzalwana ke ukuba ndine-3gs 3.1.2 ene-iboot 359.3.2 ekufuneka ndisebenzise ii-cadaves ze-blackra1n ukuba ndiyiqalele phantsi iphone andikwazi ukuyiphula ngejubane yempepho yekhephu?
Molo, ndiyenzile into oyithethayo nge-2g kodwa xa ndiqhuba ifayile ekhutshelweyo apho ukubuyiselwa kuqala khona kwi-iTunes indixelela ukuba kwenzeke impazamo engaziwayo (1604), kwaye ihpone ayivuliwe, ungandinceda nceda, Ndiyabulela kakhulu!
Molweni zihlobo: Ndine-iphone 3g kwaye ndihlaziye i-firmware ukuba ibe ngu-3.1.3. Ngoku undivumela ukuba ndenze iminxeba engxamisekileyo; Ifown ​​ibingatshixwanga andazi ukuba ndenzeni ukuyivula kwakhona. Ndifunde iiblogi ezininzi kodwa akukho namnye ondinika impendulo eyonelisayo; Ndiwalandele onke amanyathelo nge-snowbleezer kodwa xa ndiyibuyisela ndihlala ndifumana impazamo eyi-1604 okanye eyi-1602. Enkosi ngokundinceda.
Zama ireb, kodwa ukuba ufuna ukuyisebenzisa nenkampani engekho mthethweni ngalo mzuzu uhlala nepod touch
Ndiyisebenzise nje kwi-iphone 2G yam kwaye ayisebenzi. Xa ndizama ukufaka kwii-Itunes zam, ndifumana umyalezo olumkisayo obonisa impazamo ye-14.
Molweni bafana, ndingumntu omtsha osandula ukuthenga i-3GS kwaye ndifuna ukuyaphula ejele. Ngale nkcazo yale post ndinako? Xa ndiyenza, ngaba ndingongeza izicelo kuyo? Ndithenge iBoot kwaye eyam indala.
Ndifuna ukufumana isandla sam emnxebeni wam kodwa ndifuna ukuqinisekisa ukuba ayisiyiyo le khosi ndinokubeka i-fir 3.1.3 kwi-iPhone ngaphandle kweengxaki.
Nge-3G, kuphela abo bane-iPhone, nokuba SIMAHLA ekhaya, okanye abasebenzisa i-iPhone yokuthenga, abanokuyenza okwangoku. Umzekelo eSpain Movistar, abo basebenzisa enye inkampani abanakuyenza kuba okwangoku AKUKHO UKUKHULULEKA ".
Ezi iPhones sithetha ngazo AKUFANELE zikhethe "Yenza i-iPhone isebenze" njengoko zisebenza ngokuthe ngqo nge iTunes xa ibuyisiwe.
Ukuba awucacisi, faka i-firmware eyenziwe nge-jailbreak (isiko):
Ayiyihlaziyi ibe ngu-3.1.3, kodwa ndicinga ukuba (khange ndikwazi ukuyiqinisekisa kuba andizukuyenza nge-iphones zam) ukuba ziyilayishe ziye ku-3.1.2 kwaye unokhetho oluncinci elizayo namhlanje
Ukuba unengxaki yokwenza, sebenzisa i-firmware yesiko esele yenziwe, onemigca embalwa apha ngasentla.
okwangoku hlala unje, ungayenzi ...
IVICTORGMA kunye noLuis
Kuya kufuneka usebenzise i-IREB xa ufumana impazamo
Luis: i-jailbreak ayikhuphi, ukuba yile nto uyifunayo
Uya kuba nengxaki yeJalbeak nge-3.1.3.
Ukuba usenayo i-3.1.2, ungaze ucinge ngokuhlaziya kwaye uyenze iBlackra1n nge-3.1.2
Umntu othile angandixelela indlela yokubuyela umva ukusuka ku-3.1.3 ukuya kuhlobo 3.1.2 nceda, ubone ukuba ungandinceda na eBerlin ndiyayixabisa!
Enkosi uBerllin, ndizamile ukusebenzisa i-IREB. Ndicela undikhuphe ngaphandle kwamathandabuzo, ngalo mzuzu andisakwazi kwenza kwanto nge iphone yam? Ndiyathetha, andinakuyikhulula kwakhona? Ngaba ukwaphuka kwejele ndingayisebenzisa ubuncinci njenge-ipod? Undicebisa ukuba ndenze ntoni?
Berllin, ndinayo iBoot endala. Andikwazi kuhlaziya ku-3.1.3
Molo, ndade ndakwazi ukwenza ukubuyiselwa kwempepho ekhephu, kodwa ngoku isikrini simnyama sinophawu lwekhephu kwaye andazi ukuba ndenzeni. I-iTunes ayiyiboni iphone ... Ndizamile ukuphuma kwimowudi ye-DFU kodwa isikrini sihlala simnyama.
Kwithiyori inako, kodwa inika iingxaki ezininzi ngexesha lofakelo.
I-sn0wbreeze isandula ukuhlaziywa kwi-1.4
Ngasentla kwekhonkco sele litshintshelwe kule nguqulo intsha.
Ingcebiso yam kukuba uhlale no-3.1.2 okwangoku, de yonke into ikhuseleke, kwaye i-iPhone ayinakuphuculwa
Kulungile, ndiza kulandela icebiso lakho ... inqaku kukuba ndibona kuphela ilogo yekhephu kwi-iphone yam kwaye ayikho enye into. Ngaphambi kokuba andivumele ndifowunele ngokungxamisekileyo, ngoku yonke into imnyama. Ndacinga ukuba izakuqhubeka kwimodi ye-DFU kwaye ndizamile ukuphuma, kodwa iphone iqala kwakhona kwaye ihlala injalo… sele ndinqwenela kakhulu kwaye ndiyalubulela uncedo lwakho olukhulu… Nceda undixelele eminye imiyalelo.
kukho uhlaziyo lwekhephu elibomvu v1.4
Ndikhuphela uguqulelo 1.4
Nje ukuba ndiyikhuphele, ndenza ngokuchanekileyo ngokufanayo ne-v 1.3?
Walter Pavone sitsho
Ndivale i-iPhone yam, kuba inenguqulo 3.1.3 ukuba ndenza oko kuthethwa leli phepha, ngaba ndingayikhulula?
Phendula kuWalter pavone
Ngaba kukho umntu ophumeleleyo ekuhlaziyweni kwe-firmware 3.13 isiko ephekwe ngemiyalelo yeberlin nge3g okanye 3gs ????
Ingxaki yeSim nge3GS yam, igalelo elihle kakhulu. Enkosi
Apha ngezantsi kwezimvo zakho
Ingxaki yam nge-2G yam sele isonjululwe kodwa kuye kwafuneka ndikhuphele ingxelo entsha yeSn0wbreeze. Iyasebenza!!!
Xa ndifika kwiscreen 4 (enye yokukhetha i-firmware 3.1.3) kwaye ndiyikhangela, akukho nanye evelayo, ifolda apho ndiyivulile iyavela kodwa andifumani nto yokuvula
Molweni nonke !!
Izolo ndenze isiko lokuthinta udadewethu nge-1G ipod touch, yonke into ihambe kakuhle, kodwa xa bendizokuyifaka, ukuba ndibeka i-iPod kwimo ye-DFU, indinike impazamo eyi-1600, kodwa ukuba ndiyenzile ngaphandle kokuyifaka kwi-DFU, Oko kukuthi, ukuqhagamshela i-iPod kwi-iTunes, ukuyilindela ukuba ihambelane kwaye emva koko ndiyinike ukubuyisela kunye neShift, ndiyifakile ngokugqibeleleyo, kwaye ngaphandle kwengxaki.
yintoni na le nto?
Masibone ukuba ndivile:
Emva kokuhlaziya ngokungacacanga i-iphone 3g yam, yasimahla yi-imei, ngoku enenkampani engekho mthethweni, inenguqulo 3.1.3 kunye ne-baseband 05.12.01.
Ndiwalandele onke amanyathelo nge-Sn0wbreeze, kwaye iyaqhubeka nohlobo olunye 3.1.3. kunye ne-baseband 05.12.01.
Imelwe ukuba iqhubeke ngohlobo olufanayo kodwa itshintshele kwi-baseband yangaphambili, oko kukuthi, iye kwi-5.11.07 kwaye ikwanayo ne-cydia?
Kulungile emva kokwenza onke amanyathelo andikaphumeleli nganto, kwenzeka ntoni ????? Andazi ukuba ndenza into embi. Nceda uncede,
Ke sivakala ... ndine-3G ngohlobo 3.1.3 (7E18) kunye ne-firmware 05.12.01 ...... Ndithetha ukuba ... andinakwenza nto. hayi?
I-baseband ayinakwehliswa, into eyenziwa yi-sn0wbreeze kukugcina indala kuba sele ivuliwe.
Andiqondi, kuthetha ntoni ukugcina endala?
UIvan Jimenez sitsho
molo kwangaphambili enkosi. Ndandihlaziya i-iPhone 2G yam ukuya kuhlobo 3.1.3 lwe-fware, emva kokuba igqibile ukuvuselela ivumela kuphela iifowuni ezingxamisekileyo kwaye indixelela ukuba i-SIM ayisebenzi, kwaye ndifuna ukuyisebenzisa ukuba uyakwazi ukunika isandla endisilindileyo yiyo
Phendula uIvan Jimenez
ukuba uhlaziya nge-iTunes i-baseband inyuka, ukuba uyenza nge-sn0wbreeze isiko le-firmware ayinyuki, eyangoku iyagcinwa
Ngaba umntu angandinceda iphone yam ibonisa kuphela isixhobo se-usb kunye ne-itunes esikrinini emva kokufuna ukuyihlaziya nge-itunes kuphela iifowuni eziza zihambe. Ngoncedo !!!!!!!!!!!
Zeziphi iindlela endinokukhetha kuzo ukuba ndihlaziyile ngokusemthethweni 3.1.3 ?????
Inye into endino-3gs kunye nohlobo 3.1.3 esele ndinayo! Kodwa xa ndenza yonke into yokugqibela eyenzekileyo, ndiyibeka kwimowudi ye-dfu kwaye i-iTunes ivule, im dipe, ndiyibuyisile kwakhona, ndiyibuyisile, akukho nto, akukho nto! esk ... inyathelo lokugqibela ami no m liyaphuma i-itunes ivula i-normalla im icela ukuyibuyisela kodwa kunjalo! enye inkqubo yokukhangela ayenzi nto! Ndixelele ukuba ndenza njani plisss! imeyile yam yile: mmc_markillos@hotmail.com.
ngokuqinisekileyo awukhethanga yona
Oko kungenxa yokuba isikhangeli sakho sitshintshe ulwandiso ukusuka kwi-ipsw ukuya kwi-ZIP.
Kuya kufuneka uyijonge kwaye utshintshe ulwandiso ngesandla
Kwenzeka kubantu abaninzi abayifaka ngeengxaki ezimbalwa ngaphandle kwe-DFU, andazi ukuba kutheni ...
I-Baseband ayikukuthobisi, igcina le unayo kwaye ukuba unayo isezantsi ayinyusi
Yintoni ekuphazamisile kukuba uyenze, qala ukusuka ku-3.1.2 okanye ezantsi, hayi 3.1.3.
Wenze into embi
Ngokuqinisekileyo uyenzile ngaphandle kokukhetha "Yenza i-iPhone isebenze"
Yibeke kwimodi ye-DFU kwaye ubuyisele ngokweemfuno zakho ...
Kuxhomekeke kwi-iPhone onayo, kodwa ngokomgaqo ndiyoyika ukuba bambalwa okanye akukho namnye
Mka yintoni inja !!
Andikwazi nokuthoba isithuba ?? T_T
Sele ndiyenzile yonke inkqubo kwaye .ipsw yenziwa kodwa ndifuna ukuyibuyisela nge iTunes kwaye kuvela impazamo ndicinga ukuba le mpepho yomkhenkce inempazamo emva koko ndenza nge-0.9.3 redsnor kunye nalail kailbreak yesiqhelo kunye ne-cydia ndiyonwabele imibuliso ye-iphone 3.3.1… kwaye abo bafuna ukukhupha okanye ukukopisha bangafaki kwi-3.3.1 akukho sisombululo ...
Ndinee-3gs, andikwazi ukubuyela ku-3.1.2 ukusuka ku-3.1.3 ??
Ndiyaqonda ke ukuba uhlaziye i-iPhone 3G yam nge-iTunes ukuya ku-3.1.3. Andikwazi ukuqhekeza ijele ngoku, akunjalo?
Ukuba awuyigcinanga ifayile ye-ECID kwiCydia awukwazi ukwenza nayiphi na iDowngrade
Ndingacebisa abo bane-baseband abakwimeko entle, i-redsn0w okanye iPwnagetool
EBerlin Enye into, i-cydia ichaphazeleka kakhulu kum, kufanele ukuba ayihambelani no-3.1.3 okanye ikulungele? Kwidatha ye-loadin into enje ihlala njengemizuzu emi-3 kwaye emva koko iyaqala kwaye xa ndifaka isicelo se-cydia siphela kwaye sivale…. ngokubhekisele…
Molo mhlobo ndinayo iboot entsha okanye ukuthi "embi" ja nokuba ndingayisebenzisa xa ndine-3.1.2 kwaye icinyiwe i-ps na kodwa ndasebenzisa i-ra1n emnyama kwaye kunjalo kodwa xa ndingayibuyisanga Akukho nto icinywayo xa kusetyenziswe ikhephu .. Ngaba uza kuba neengxaki? = q Ndibekwe kwimodi ye-dfu kwaye ukuba kunjalo, ngalo lonke ixesha kusenzeka kum kwaye kunxibelelana kwakhona nekhompyuter, ingaba yonke into endiyikhupheleyo kwi-cydia njl. Imibuliso yegrax
Ndiyenzile into ebendixelele yona kodwa ndiyaqhubeka ukuba nengxaki efanayo, ndiyigcina iphone yam apho i-sim ingavumelekanga, ukuba ungandinceda, enkosi kwangaphambili
Ndifuna nje ukwazi i-berlin ukuba xa inkqubo iza kuphuma ivule i-iphone 3g ngo-3.1.3
hey berlin ndabona enye into kwaye akukho nto ayidluli igqabi, ithambo, iapile xq ayisenguye othambileyo kodwa igqabi kwaye lihle, ndithatha kakubi ukuba aligqithisi igqabi noc q yile nto ifunwa yile conxuda
kakuhle ... uvavanyo olu-1.5.1 nge-3GS yokuqala ....
Yonke into ILUNGILE ...
1.-Kulabo baya ku "mnyama" (impazamo ye-1600 okanye enye) ungakhathazeki. Icebo ayikuko ukwenza i-DFU ukuba awucinezeli iKhaya kunye nezinye izitshixo kude kuphume intambo (gcina omabini amaqhosha ecinezelwe nasemva kokuba iapile liphume).
2.-Nje ukuba kwenziwe, ungazama kwakhona nge-firmware ye-snowbrizze custon okanye ubuyele kwi-firmware eyi-3.12 yesiko-
3.-Ngokwam, ndizamile nge-iphone 3gs (nge-3,12) kwaye ndiyifumene i-JB ngaphandle kweengxaki, kodwa andikwazanga ukuyikhupha ngesoftware ye-GEHOT okanye enye evela kwiqela le-DEAV TEAM.
4.-Isiphelo: isebenza kuphela kwii-iPhones ezikhutshwe kumzi-mveliso okanye ezo zinenkampani "ezigunyazisiweyo" ezifuna ukwenza i-jailbreack.
5.-Kokubantu abaseleyo, kungcono ukulinda into egqibeleleyo.
Emva kokubuyela ku-3.12 kulungile ukutshintsha intambo kwenye izibuko le-USB. Andazi ukuba kutheni kodwa ndiye ndafumanisa ukuba kulungile.
qala kabusha iphone kwaye ukuba ihlala injalo, faka kwakhona i-cydia Installer nge-cydia
akukho nto icinywayo
faka i-firmware yokugcina i-2G:
Jonga ukuze ubone ukuba yeyiphi iBotneuter onayo ukusukela ukuba ibiyi-5.8, ungayithoba isidima:
Molweni zihlobo ndinee-3Gs ze-iPhone ezine-IBOOT 359-3 kwaye ndingathanda ukwazi ukuba yeyona ingalungiswa na okanye hayi, kuba ndenze yonke into nge-iPhone yam kwaye akukho nto isafileyo. emva kokuba ngempazamo ndayihlaziya nge-iTunes ukuya kuhlobo 3.1.3
Ukuba umntu uyakwazi ukusombulula, ndiyakucela ukuba undithumelele isisombululo nge-imeyile, ukuba ayinangxaki kakhulu.
UCarlos (impumlo) sitsho
Ikhamera ndiyabulela kakhulu, ubuyile okwesibini, ubonga usindiso lwam kwaye u-abia wazama ukwenza ukuqhekeka kwejele nezinye iinkqubo kunye nezinye izifundo kunye nomnatha awunakude ndikufumane enkosi.
Phendula uCarlos (Morro)
Andazi ukuba kwakutheni ukuze ndihlaziye i-iPhone 3GS yam nge-iTunes kuba andikwazi ukuyibhuqa, yayikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye kwakungekho ndlela emnyama okanye nantoni na, ke ndicinga ukuba ndijijile. Okwangoku iyakundivumela ngohlobo oluhlaziyiweyo 3.1.3 ????
Inokwenzeka into yokuba unee-3gs zokuqala kwaye ugcine i-ECID eCydia.
Ukuba awuyenzanga le nto ngekhe
Ndine iphone 2G. Ndilandela onke amanyathelo kwaye xa ndigqiba ukubuyisela i-firmware ndifumana le mpazamo kwi-iTunes: «I-iPhone ayinakubuyiselwa. Impazamo engaziwayo yenzekile (6) »Ndizamile nokudlulisa iReb kodwa ayenzi nto. Iphone imnyama ayihambi apho.
Naziphi na izimvo ???
UJuan Carlos Hernandez sitsho
oku kuyasebenza kwi-ipod touch 3.1.3
Ndifuna nje ukuba ne-cydia
Uxolo, ndiyintsha kule nto.
Phendula u-juan carlos hernandez
YASOMBULULA ibug yam. Yayingumbandela welogo yebhodi awayeyibekile. Andazi ukuba kutheni kodwa ayisebenzi. Ndibeke isiko olithumele kwelinye iposi kwaye lilungile.
Molo, inyani kukuba isifundo silunge kakhulu kodwa kukho into esisiseko endingathanda ukuba umntu ayiphendule ngokungazi ngokupheleleyo ngalo mbandela. Ngaba i-jailbreak yanele ukukhulula kwaye ivule iphone? Kutshanje ndiye ndaba lilishwa lokuba i-iPhone yakhe isebenze ngokugqibeleleyo, ndiyiphosile ngokuyihlaziya kwi-iTunes, ndikhuphela ingxelo ebengenakoyiswa 3.1.3 ukuza kuthi ga ngoku. Ndilahlekile kakhulu kuba ndifumana ulwazi oluphikisanayo.
Ukuba ndenza le nto ithethwa sesi sifundo, ngaba ndingayibuyisela ifowuni yam isebenza ngokucacileyo?
I-jailblreak ayinanto yakwenza nokuvula.
I-jailbreak iya kuba nakho ukufaka iCydia kunye neLiwa.
Ngoku ukuze uvule iJailbreak ukuba kubalulekile.
Iifayile ezenziwe ngokwezifiso zenziwa njengesiqhelo xa iApple itshintsha i-firmware ukuze ilayishe ingxelo kwaye iyinxalenye ye-firmware esezantsi, hayi eyangoku
Ndine-iPhone 3 Gs 32Gb enokuhlala iinyanga ezingama-24 kunye neMovistar kunye nohlobo 3.1.2.Ngaba iMovistar iza kohlwaya xa ndiyenza le nto? (Ndisemva kweBluetooth kunye neGPS eQhekekileyo)
USergio, ayinanto yakwenza nayo. Inye into esisigxina (echaphazela inqanaba lotshintsho lweemeko zesivumelwano) kwaye enye into uyenza kwi-iPhone yakho (kule meko ke lungisa i-firmware yayo ukongeza izicelo zomntu wesithathu ezingalawulwa yi-Apple). Kwenze ngaphandle koloyiko.
berllin, ngaba oku kuyasebenza kwi-2GB iPod Touch 3 / 8G (yangoku) enefirm 3.1.3? Ngokuqinisekileyo ewe, kodwa ayisiyokuyicoca ... kuba ndibona umzekelo kwaye kubonakala ngathi ichanekile, kodwa ndingathanda ukwazi ukuba ungandiqinisekisa na (ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo okwenzekayo iPod Touch yangoku, ukuba kufuneka bayigqithise i-blackra1n ngalo lonke ixesha ukuba icinyiwe ngokupheleleyo).
Ndizamile nje ukubona ukuba yintoni endinayo (isifundo osibeka apha kwii-3gs ezikwibhlog) kwaye kuvela ukuba andifumananga ukhetho lwe- «indlela yokungena ... ngoku andikhumbuli ukuba yintoni ndibeke, kodwa yeyiphi indlela engakhange ivele kwi-XP »kwaye ndijongile kuzo ZONKE iinketho kwaye khange zibeke nto kwi-Iboot okanye kwi-ECID.
Kuya kufuneka ndibuyise, kwaye nge-heck, ndihlaziye i-3.1.3, kwaye andazi inombolo yam yokuQala.
NGAPHAMBI kokuba ndinenguqulo 3.1.2 kwaye efanayo inokubona iJailbreaked »ngale nguqulo.
NGOKU andinalwazi lokuba i-Iboot yale nguqulo intsha 3.1.3 iyahambelana (QINISEKA NGOKWEBlog. Kuba iya kuba yeyona intsha emva kohlaziyo olwenziwe zii-cushions)
ENKOSI ngayo yonke into ndiyathemba ukuba iboot entsha ayibekwanga kwii-3Gs
Kwenzeka into efanayo kum nakuSergio.
Andazi ukuba yintoni iBoot kuba kwi-xp ayibeki ndlela yenye into eza kufana, kodwa ayibonakali i-ECID okanye iBoot.
Umbuzo wam ngowokuba ndiyakwazi ukwenza i-jailbreak okanye hayi, ndinayo yasimahla ye-imei kwaye ndibulise wonke umntu.
Ndihlaziye ngempazamo ku-3.1.3 ... kwaye ihamba no-Orenji ngokugqibeleleyo (simahla yi-imei) (isimahla, andazi ukuba isiTaliyane simahla okanye loluphi udidi ... ukuba umntu uyandinceda, inokuba Ndizamile ukwenza isiko eli-3.1.3 nge-sn0breezer kwaye iphosa impazamo eyi-1600, nakwinxalenye yokwenza i-custon xa ukhetha imodeli yefowuni ndifumana umyalezo wesilumkiso undixelela ukuba i-blackr1n (geohot ) ayixhasi u-5.12.01… andazi qsera Ityala linjalo, indivumela ukuba ndiqhubeke nenkqubo, kwaye xa ndiyibuyisela, indinika impazamo eyi-1600.
kwinguqulelo 3.1.2 Ndiyiphule nge-blackr1n (geohotz) kwaye ibintle ukuba icinyiwe khange ndiphinde ndibekho ejele ...
ISISOMBULULO SOLUGUNA ???????
MUXAS ENKOSI KWANGAPHAMBILI
UMovistar akayazi into oyenzayo.
Ngoku ukuba ubuya kuyithumela kwinkonzo yezobuchwephesha, kwaye awunakuyibuyisela kwakhona utyikityo lwantlandlolo, ngelahlekile
Nge-firmware 3.1.3 inokwenziwa kuphela nge-redSn0w 0.9.4 kwaye hayi kuzo zonke iimeko, kuphela kwi:
-I-iPod touch 2G (hayi iMC)
Ngenxa yento oyithethayo okanye unayo iBott endala okanye ukhululekile awunangxaki zokubuyisela.
Ubona eyona nto ilula ukubona ukuba uyifumana ngokubuyisela i-3.1.2 ekhutshelweyo kwikhompyuter kwaye ukuba ifakwe, emva koko uyigqithisela iBlackra1n kuyo.
iBoot dl nangona ndizamile kwimo yeDfu okanye ekubuyiseleni kwaye ayisebenzi kwaphela, yiyo loo nto ndiyoyika ukwenza into kuba andazi ukuba ndinantoni iBoot, nangona ndikuxelele ukuba sele ndiyenzile Ukuphulukana nentolongo ndiyazi kuphela ukuba yimodeli ye-MC
Olunye uqeqesho lokukhuphela i-OS.kanye ukwenza i-donwgrade.okanye kufuneka ndikhuphele i-fw 3.1.2 yoqobo kunye ne-itunes yale vrsion (isuka phi ???) kwaye ndiyinika ukubuyisela kwimowudi ye-dfu okanye kwimowudi ebonakalayo Intambo kunye nobunzima
Molo BERLIN Ndicinga ukuba kufanele ucacise ukuba i-fredSn0w 0.9.4 isebenza kwinguqulelo 3.1.3 kodwa abo (njengam) i-firmware ye-05.12.01 modem abakwazi …… okanye bayakwazi?
Sebenzisa redsnw 0.9.3
Ewe inako, ukuba sithetha nge-3G
"Ukuba kwelinye icala une-iPod Touch 1G, i-iPhone 2G, okanye i-iPhone 3G kwaye awufuni kuvulwa, kufuneka usebenzise i-redsn0w, kodwa uguqulelo 0.9.3, kuba iyakhawuleza kwaye ngekhe kudlule kwinkqubo epheleleyo yokubuyiselwa. Konke okufuneka ukwenze kukuhlaziya kwaye ubaleke u-redsn0w, ukhombe kwiFirmware 3.1.2, endaweni yeFirmware 3.1.3 ”.
Molweni ekuseni nonke,
Ndiyamphakamisa umqeqeshi, into yokuqala.
Ndine-3G 359.3.2Gs ene-iBoot 1.3.1 kunye ne-OS XNUMX ekuye kwafuneka ndiyibeke ngenye imini emva kwentsholongwane ye-rick astley de los coj ... Ngendlela esemthethweni, umhambisi womthetho ...
Ngapha koko, umbuzo wam ngowokuba ingaba ndingayifumana na i-jailbreak nge-sn0wbreeze v1.5.1 njengoko ubeka isifundo?
Oko kukuthi ngoku nge-3Gs andikwazi "ukubanjwa kwejele" kuba ndihlaziye ukusuka ku-3.1.2 ukuya ku-3.1.3 ngempazamo, uxolo, kuba ukuba andiyibuyisi kwaye ndiyivuselele ngaxeshanye, ndishiywe ngaphandle ifowuni (enkosi kwisifundo sokufumana i-iboot, kwaye ndiyakukhuthaza ukuba uyisuse apha ukuze kungenzeki okufanayo kubanini be-3Gs)
Ngaba ikhona indlela yokubuyela ku-3.1.2? Kwaye i-100% isebenza ngokufanelekileyo NGOKWENKQUBO ... okanye ngaba kuya kufuneka ndilinde iinyanga "ukuze ndiyiphule ejele"?
Damn ukuba ndiyazi ukuba nditsiba iIboot yemiqamelo
Esinye sezizathu sokuba ndifune ukwenza i-jalibreak kungenxa yokuba i-iPhone yam ayifuni ukufumana i-Wi-Fi kunye neentsuku emva kokuba ndiyifumene, kodwa ndisenengxaki efanayo endiyihlaziyayo, yile iPhone 2G yam iyekile ukukhangela i-Wi -fi, uguqulelo 3.1.3 (7E18) lwe Modem Firmware ngu 04.05.04_G. enkosi kwangaphambili ukuba umntu angandinika uncedo oluncinci ndingalixabisa
Iphone 3Gs 32 Gb ihlaziywe ngempazamo kwinguqulelo 3.1.3 7E18.
Yifowuni yoqobo, andenzanga nto.
Ngaba likho ithuba lokubuyela ku-3.1.2 ukuya kwi-jalibreak nge-blackra1n ??
Phendula ku Novoa807
Ngokubanzi kwabo babuza:
Nge-3Gs, awungekhe ubuyele ku-3.1.2 ukuba ifayile ye-ECID ayigcinwanga kwiCydia ngenguqulo 3.1.2
Awunakho, kuba unayo iBoot entsha
zama ukwenza ukubuyisela nge-redsn0w 0.9.3
UGiuseppe Mayorga sitsho
xa ndenza le nkqubo, indinika lo myalezo kwii-Itunes: 2010-02-20 14: 05: 08.484 iTunes.exe [3400: bc0]: iTunes: Buyisela impazamo 1600
Phendula kuGiuseppe Mayorga
Molo ... andiqondi kakhulu ngale nto bendifuna ukukubuza ukuba ayisiyongxaki na le ndinayo i-iPhone 3g. Inguqulelo 3.1.3 (7E18) kunye neFireware 05.12.01 Andifuni ukukhulula ikhompyuter yam, ndifuna nje ukubeka usetyenziso / imidlalo / njl. kukho indlela yokwenza.
Okanye kuya kufuneka ndiyilebele ikhompyuter yam?
Ndizamile ukuzama le khosi kodwa khange indinike ziphumo kuba andazi kangako ngale nto okanye akukho nkqubo ixhaphakileyo yenguqulo yekhompyuter yam. Ndiyazi nje ukuba ipowusta ivela kwindawo apho ndikhetha phakathi kwe-iPhone 3G / 3GS okanye ngezantsi kwe-iPhone 2G iya kuba linyathelo # 9, ayindivumeli ukuba ndiyijonge kunye neposta.
Sele ndilixabisile igalelo lakho kwaye ukuba ungandinceda ndiza kuba nombulelo
Siyafana, kubonakala kum ngathi kuya kufuneka silinde, ukubona ukuba baphendula ngento entsha.
Abo bane-3GS ene-firmware 3.1.2 kunye ne-WINDOWS XP ... UNGAYENZI INYATHELO YOKUJONGA IBOOT !! SUKUYIBEKE iphone kwimowudi ye-DFU !!!
i-iTUnes iya kukunyanzela ukuba "ubuyisele kwaye uhlaziye" okanye "urhoxise"
kunye no-1 kwabayi-2
_ okanye Rhoxisa kwaye ushiye ngaphandle kwe-iPhone esebenzayo
_ okanye Buyisela kwaye uhlaziye u-3.1.3 nge-baseband IMPOSSIBLE FROM JAILBREAK kwaye Ukhuphele kwi-FIRMWARE ukuya ku-3.1.2 !!!!
Ndiyathemba ukuba ndiphazamisekile eBerlin
Ndenze into yokuqalisa kwi-XP kwaye ungaphuma kwimowudi ye-DFU ngokwenza useto kwakhona ngokucinezela Amandla nasekhaya ngaxeshanye de kube kuvuliwe ubuncinci ukuba buyandisebenzela.
Ukuba uyigcinile i-ecid kwi-cydia ungathoba uye ku-3.1.2 nangona i-baseband ingazukuhla kodwa ke ungagqitha i-blackra1n kuyo kwaye sele unentolongo kwakhona
Molo ,,, iphone 3gs 3.1.3 (7e18) I-MODMAWARE MODEM 05.12.01 ,, nceda, ungayiqala njani i-jailbreak ukuba uyakwazi ,,, Ndidinga isifundo semidumba ,,, umntu andincede ?????
JOER Kwaye kutheni bengatsho ngaphambili malunga ne-iBoot?
Kwaye ndixelele ukuba ndiyifumana njani i-Cydia ngaphandle kweJailbreak ???? Ukuba i-1st (njengoko ndiyiqonda) kuya kufuneka uyenze iJailbreak ukuqhubeka neCydia ¬¬
Khumbula ukuba bendikunye ne-iphone kangangeentsuku ezili-10 kwaye andiveli eMAC
Ukulinda lithuba lam ndiyakucaphukela
Ndikwi-3Gs 32 Gb firmware 3.1.3 baseband 05.12.01 (esele ndiyazi ngentloko) KWEZOMTHETHO, neMovistar ngasemva nangaphandle kokwenza iJailbreak
IWindows XP sp3
Ndingenza ntoni? Lindela i-2045, akunjalo?
IBerllin khange ndikwazi ukwenza nantoni na, iphone yam iyaqhubeka ngaphandle kokufumana nayiphi na inethiwekhi ye-wi-fi
Ukuba awuyigcinanga i-ecid kwi-cydia okwangoku, yima
Andikwazi ukucinga ngenye into
uyigcina njani i-ecid kwi-cydia yexesha elizayo?
Ndine 3G nge 3.1.2
Ifayile ye-ECID ye-3GS kuphela
Ngapha koko, hlala no-3.1.2 kwaye ungafaki kuba akukho ziphuculo zilungele ukuqaphela i-iphone ngo-3.1.3
kulungile enkosi kakhulu kwi-berllin
EBerlin ndophukile ejele ngekhonkco olishiyileyo https://www.actualidadiphone.com/2010/02/06/tutorial-jailbreak-con-el-custom-firmware-3-1-3-modificado-para-el-iphone-3g/
kodwa xa usenza inkqubo yofakelo, iphone iyabambeka ngophawu lwekhephu kunye nescreen esimnyama phaya, akwenzeki, kufuneka ndenze ntoni, ndifuna uncedo lwakho, iphone yam yi3g
Esi sifundo se-3.1.3 sokuqhekeka kwejele sinokusetyenziswa kwimodeli ye-MC?
Kukho ukudideka okuninzi ngale MC MODEL.
Iimpendulo zakho zobubele ziya kuthakazelelwa!
Iifowuni zam ze-3G ziyi-3.1.3 yemodeli yoqobo.
I-3GS 16gb entsha nge-3.1.2
izilumkiso ngaphambi kokuqala ukusebenza ne-blackra1n
Sukucima i-droplet yeBlacra1n eya kuvela kwi-iphone yakho.
Ungakhe ucinge ngokuhlaziya iphone yakho ibe ngu-3.1.3.
ngalo lonke ixesha ivala, qala kabusha iphone, kuyakufuneka uyidlulise kwakhona iBlacra1n kuyo, kodwa ithatha ngaphantsi kwemizuzwana engama-30.
Ikopi yefayile ye-ECID xa kunokwenzeka?
Ngeyam yenzekile kum ukuba iye emnyama kwaye xa ibuyisela andazi ukuba ndihlaziya njani ku-3.1.3
Igcinwe kwiseva yeCydia
Ndifaka i-blackra1n, i-cydia kwaye ndizama ukufaka.
Kuya kufuneka ndiqale kwakhona kwaye ihlala ine-logo ye-itunes ye-USB
Ngokunyusela kwi-3.1.3, uyilayishe i-baseband kwi-05.12.01
Awunakuze wenze Nantoni na
kufuneka ulinde njengoXOLO lwam
Molo… ndine-iPhone 2g, kwaye ndifuna ukwenza (iJailbreak kwiFirmware 3.1.3 ye-iPhone eneSn0wbreeze v1.3 (Windows)… kodwa ndinefirmware ye-modem 04.05.04_G enenguqulo 2.2.1 (5H11).
ukuba kuyacetyiswa ukuba wenze olu tshintsho ??? Kwaye kwelinye andinakukhuphela i-PKGBackup kwi-cydia kuba ndine-2.2.1, enkosi kakhulu kwangaphambili, kunye nemibuliso kuyo yonke ipheneross ..
Njengokuba zinjalo, ndenze yonke into njengoko ichaziwe, ii-3Gs zam zisebenza ukuza kuthi ga ngoku kuyo yonke into, i-wifi, njl. ndigqibele nge-ipod 3gs ...
Mva kwemini ndine-2G iphone, kodwa bendisisiyatha sokuhlaziya isoftware engu-3.1.3 kwaye ngoku ndifumana impazamo engaziboniyo kwi-iTunes, ngale sn0wbreeze-v1-5-1 ndingayenza i-iphone yam ???
Ngaphandle kokukhuphela i-sn0wbreeze-v1-5-1 kuya kufuneka ndikhuphele i-iPhone1, 1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw ???
- qala kabusha iphone
- Yibeke kwimowudi yenqwelomoya-susa imowudi yenqwelomoya kwaye uqale ngokutsha
Cima i-3G kwaye uqalise kwakhona
yenza ezi mvavanyo ...
Ndiyabulela i-berllin ngoncedo lwakho kodwa bendifunda kwaye i-hyperlink ondithumelele yona yeyenkqubo yokusebenza ye-MAC kwinto endiyiqondayo, ndisebenzisa windows iyakusebenzela sn0wbreeze-v1-5-1 ???
Ngomnye umbuzo we-berllin uqaphele ukuba ndinengxaki endiyichazileyo kodwa andazi xa ndisenza le jailbreak zonke izicelo zam ezifakiweyo endizicimileyo, kwaye ungandinceda nendlela yokucima umda kwi-iphone yam ye-2G ukuba andizukuhlawulisa xa ndisebenzisa i-wifi ???
Zama ngazo zonke iindlela, ndine-iPhone 3g ehlaziyiweyo eya ku-3.1.3 (efanayo neninzi ngenxa yempazamo) kwaye ayindishiyi nangayiphi na indlela. Ngeqhwa, ndifumana impazamo kwi-iTunes xa ndigqiba ukubuyisela, nge-Blackrain andizange ndigqibe ukuyifunda kwaye ngekhephu elibomvu andinakuze ndingene kwi-DFU. NCEDA UNCEDE
Ikhonkco ongentla nje kwezimvo zakho liya kwinqaku apho linokukhutshelwa khona zombini kwiWindows nakwiMac.
Xa usebenzisa i-Wi-Fi i-Edge AKUKHO isebenza (i-Wi-Fi ineyona nto iphambili kuyo).
Ngalesi sifundo senziwe kakuhle kakhulu:
Ngale software uyazi kwangoko ukuba unokwenza i-jailbreak okanye hayi. yeyewindows:
UBerllin, ndizamile loo khokelo, kodwa xa ndingena kwi-DFU ayindivumeli ukuba ndingene nangayiphi na indlela, ndizamile ngazo zonke iindlela ekuthethwa ngayo apho nakuzo zonke iiforamu ezikwi-intanethi kwaye ayindivumeli ukuba ndingene I-DFU. Ngaba ayikho indlela eya ejele ngaphandle kokuthotyelwa kwi-3.1.2 okanye ukungena kwi-DFU? Ndiyabulela kakhulu
Enkosi ngoncedo lwakho Berllin !!
Ibali: hlaziya kwi-3.1.3. Iselfowni esandula ukuthengwa kuba ezinye izinto bezingasebenzi. Ukusuka apho akandihambi, undivumela kuphela ukuba ndifowunelwe ngokungxamisekileyo kwaye andibuze i-chip yoqobo.
Ndiye ndenza yonke into oyichazayo apha, kumanyathelo okuqala i-sn0wbreeze yandilumkisa ukuba ikhompyuter yam ayinakwenziwa ngaphandle kokuba sele iqhekeziwe, kwaye ukuba ndinayo i-bootrom ehlaziyiweyo, i-sn0wbreeze ayinakusetyenziswa. Kuba iqela lam besele liphulwe ejele ndaqhubeka
kodwa xa kufuneka ndikhethe i-blacksn0w ayindivumeli. ndixelele:
«I-Blacksn0w ayixhaswanga kwi-3.1.3! ukuba unayo i-05.11.07 baseband hlala apho! IGeoHot ayiyihlaziyanga kwi-CommCenter entsha! »
Ndicinga ukuba ndinayo i-bootrom ehlaziyiweyo… ikhona into endinokuyenza ukusebenzisa i-iPhone yam ???
Ngaba uyayenza imo ye-DFU ngokuchanekileyo?:
Ukuba awukwazi, faka imo yokubuyisela:
«Ukuze senze ukubuyisela kwakhona kufuneka sicinezele i-Power neKhaya iqhosha kangangesithuba semizuzu eli-15 okanye engama-25 de i-iPhone iqale ngokutsha, nje ukuba ivule kwakhona sikhulule isitshixo saMandla kwaye sicinezele iqhosha lasekhaya kuphela, nje ukuba Iqalisiwe kwakhona siza kuyicela ukuba siyidibanise ngentambo kwi-iTunes, kanye njengesihlandlo sokuqala ukuyithenga. iTunes iya kukhangela i-iPhone kwimowudi yokubuyisela »
Kwaye ukuba uyifumana ukuze ukwazi ukujongana nejele kunye no-3.1.3 kwi-3G, kuphela nge-redsnow 0.9.3 okanye i-0.9.4
Ungandixeleli ukuba yeyiphi i-iPhone onayo
Uxolo, ndiphazamile kwinkqubo,
Sele ndiyenzile kwakhona kwaye ekuphela kwento endingayiqondiyo yile ilandelayo. Ndikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwi-iTunes kwaye ndacinezela ishifti kwaye kufuneka ndikhethe ntoni ??? Ucinga ntoni nge-sn0wbreezze, ewe, kodwa iphi yona ????
Ndine 3gs 32gb iBoot ingama-359.3, i-baseband iyi-05.11.07 kwaye i-firewire iyayihlaziya ibe ngu-3.1.3.
Sele ndiyifumene ifayile endiyenzileyo kodwa xa ndibuyisela ndifumana impazamo eyi-1600
Enkosi kwangaphambili ngomdla!
Ngale Boot awukwazi jalbreak ii-3Gs ezine-3.1.3
Ukuba ubungalayishanga kule firmware, ngewuyenzile, kunye neengxaki ezincinci.
kwaye ndingenza ntoni ngeselula yam? ngoku ekuphela kwento ayenzayo kundibuza nge-sim khadi endithenge ngayo izixhobo, endingenayo ...
Ndidibana nawe into ethile. Yintoni enokwenziwa nge-iPhone ehlaziya ku-3.1.3. kwaye ngoku i-SIM ayindiboni, kuphela iminxeba engxamisekileyo
Molweni nonke, njenge-newbie kwezi zihloko ... ndiyathandabuza ukuba kunokwenzeka ngenguqulo 3.1.3 (7e18) efakwe njengomgangatho, ithengwe kumzi-mveliso kwaye yakhululwa ukuze ikwazi ukubeka i-cydia. Kungenxa yokuba amathandabuzo athathelwa ingqalelo apha kuxa ziifowuni ngaphandle kokukhulula ... enkosi kwangaphambili
Kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi i-iPhone onayo, ukubona ukuba kukho isisombululo
Umzi mveliso othengiweyo ukhutshiwe, uthetha ukuba SIMAHLA, ke kuya kufuneka kube yi-Italiya, iBelgium okanye enye ...
Ukuze ukwazi ukwenza iJailbreak, ezi paramitha zilawulwa ngaphandle kokukhululwa.
Ayinanto yakwenza nokukhululwa kwakhe, kunye neJailbrak zizinto ezahlukeneyo
Ngapha koko ukuqhekeka kwejele akukhululi
Iselfowuni yam yi-3GS 32gb ene-iBoot ngama-359.3, ibaseband ngu-05.11.07 kwaye i-firewire yayingu-3.1.2 kodwa xa ndiyivuselelayo ukuba ibe ngu-3.1.3. yonke into iyekile ukusebenzela mna! Undivumela nje ukuba ndenze iminxeba engxamisekileyo. Ngoku andizikhathazi ngokuqhekeka kwejele, ndifuna ukuba isebenze. Ngaba ikhona indlela yokuyikhulula ??? Okokuqala, Enkosi!
Ngelishwa ngoku une-ipod enye
Ibi ngaphezu koko, andinanto. Andikwazi nokuyisebenzisa njenge-iPod, nje iifowuni zongxamiseko. Uqinisekile ukuba ucinga ntoni ???
mmmm kubonakala ngathi kuya kufuneka ndiwubone umzuzu kwaye mhlawumbi naphakade ndilahlekelwe yinto endiyityalileyo kwi-iPhone.
Ngaba ikhona indlela yokuyisebenzisa ubuncinci njenge-ipod ????
Molo ekuseni uBerllin, ndiza kukuxelela ngengxaki yam:
Ndine-iPhone 3GS 32 GB yeveki ye-42 ethengwe ngoJanuwari ngefirm 3.1.2 kunye ne-baseband 5.11.07, ndiyiphule nge-blackrain kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, kodwa emva kweentsuku zaqala ukuhamba kancinci kwaye ndaye ndagqiba ekubeni ndiyicime kwaye ndayivalela kwakhona .. ngethamsanqa elibi kangangokuba ndaziqhekeza kwaye kwafuneka ndiyihlaziye ibe ngu-3.1.3 kwaye ndiyilayishe i-baseband kwi-05.12.01.
Ndifuna nje ukuyifaka entolongweni, ndingayikhuphi kwaye umbuzo wam kukuba ndingayifaka entolongweni ndisebenzisa iqabaka v1.5.1.
Enkosi kakhulu kwangaphambili!
Molo ndine-3Gb 16G iPhone yam kwaye, ndinayo i-firmware ehlaziyiweyo ngo-3.1.3, iyafana ne-baseband ngo-05.12.01 .. for that I have to jailbreak ... kuthiwa andikwazi ukuyikhupha iphone nge-firmware kunye ne-baseband esisixhobo sam !! Kodwa umbuzo wam kukuba ndingayenza na i-jailbreak ukuze ndikwazi ukufaka izicelo zasimahla? Ukuba kunjalo, ndingavuya kakhulu ukuba ungandazisa ngale ndlela! Ndiyathemba ukuba ungandinceda ndisiqingatha sesilwanyana kule hehehehe
Ingxaki yam kukuba ndithenge i-iphone 3g 8gb yam kwi-movistar ngoFebruwari kwaye yeza ne-firmware 3.1.2 kwaye yahlaziywa ngaphandle kokwazi nantoni na malunga nayo yonke le nto.
Ngoku ndine-3.1.3 kunye nemodem firmware 05.12.01 kunye nemodeli MB757Y.
ukusukela namhlanje 10/03/2010, ngaba likho ithuba lokuqhekeka kwejele.
Enkosi kwaye ukuba nabani na uqinisekile ukuba inokwenziwa, ndingavuya kakhulu xa unokuqhagamshelana nam ku cesarpg2004@hotmail.com
UJosdan57 kunye noKesare
Cesar, Awungekhe uyikhuphe, ngaphandle kokuba unethamsanqa elaneleyo lokuba ne-3G yeyokuqala ngeBootloader 05.08 kwaye unokukhuphela i-Baseband:
molo—- ncedani nceda .. Ndizamile izinto eziliwaka kwaye inye kwaye andikwazi kusebenza iphone yam….
I-iphone 3g 32gb ...
Andazi enye idatha, kuba ndinayo ibhlokiwe ekubuyiseleni kwaye andinayo i & T chip .. kwaye andinayo indlela yokuyifumana: S ke andazi ukuba yintoni ibhuti yam, okanye nantoni na ... ndiyazi kuphela ukuba ndine-firmware 3.1.3 .XNUMX….
Ndingavuya kakhulu ukuba ungandikhokela kancinci ..
imeyile yam yile hrc89@live.com.mx
enkosi berllin, kodwa andifuni kuyikhulula isebenzise omnye umsebenzisi.
Ndifuna ukuyivula ukuze ndibeke izicelo zasimahla kuyo.
I-iphone yam ihlaziywa ngempazamo ibe ngu-3.1.3 kwaye andisenayo i-cidya. oku njengoko ndiyithengileyo kodwa ndihlaziyiwe
Enkosi mzalwana !! Ndizakuyizama kunye nomhlohli oshiye uqhagamshelene !! Umdla wam ayikokuyikhulula ilayini! kuphela i-jaibreak yezicelo ... enkosi kakhulu !! Elinjani lona iphepha! Ndiyakuvuyela !!
Sele ndizamile nomhlohli ukuba undishiyile kwaye isebenze ngokugqibeleleyo kwilinge lokuqala hehehehe enkosi kakhulu !!!! I-iPhone 3G yam ine-jailbreak yayo!
Hector ukuhambelana namanye amagama
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba unayo i-iPhone kuba akukho 3G 32 Gb
Ewe, ngenxa yokuqhekeka kwejele, ikhonkco endikushiyele lona kunye nejosdan57
Xa ndifuna ukuyibuyisela ndifumana impazamo eyi-1604, ndingayisombulula njani, ndinayo i-iPhone 2g ndiyathemba kwaye uyandinceda ukuyibuyisela kunye ne-jailbreak oyenze ngokukodwa kwi-iPhone 2g xa ndifuna ukuyibuyisela nayo ukuba ndifumana impazamo 14 ndiyathemba kwaye ndincede ndibulele iitotali.
molo .. kuba andinakungena ukuze ndibone ukuba yintoni kanye kanye ... ke ndicinga ukuba zii-3gs ...
UMos José sitsho
Mholweni. Ndine-3gs ye-iphone 1.3.1 ene-movistar kwaye ngelishwa ndiyigcine ebhokisini kuba ayinakukhululwa ukuba isetyenziswe nezinye iinkampani. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba iya kukhutshwa nini? Ndingxamisekile kakhulu ... ENKOSI kwangaphambili
Phendula Mª José
Ndine-3GS 3.1.3 movistar ye-iphone, andinawo umdla wokuyisebenzisa kwezinye ii-opharetha, kuphela ukuze ndikwazi ukukhuphela imidlalo kunye nokusetyenziswa. Ndingenza ntoni !?
Ndine-iPhone 3gs 16 gb iboot endala (leyo ine-jailbreak ngaphandle kokuqalisa kwakhona kwi-blackra1n) kakuhle, ngempazamo kuye kwafuneka ndibeke i-3.1.3 kwaye i-iTunes ayindivumeli ukuba ndibuyele ku-3.1.2 okoko ndafaka iphakheji kwi-cydia k Ndenze i-iTunes ikholelwe ukuba ubuku-3.1.3 kodwa uku-3.1.2 !!!
Ndizama ukuyenzela ukuqhekeka kwekhephu kodwa andikwazi kuba indinika impazamo eyi-1604 okanye eyi-1602 ... Kulungile ngamafutshane, i-e screwed up kodwa njengoko uthethile ngasentla ungabuyela ku-3.1.2 nge-cydia ecid . Into endifuna ukundixelela yona kukuba ndingazi njani ukuba i-ecid igciniwe, igcinwe yodwa okanye yaziwa njani! Enkosi ndicela uxolo upelo lwam belungxamile!
A kunye no-05.12.01
Inokwenzeka ukuba iJailbreak iphone 3Gs firmware 3.1.3 nge-baseband 05.12.01
YINYANI???? KUNOKWENZEKA ????
Awunayo ividiyo engeyiyo ?????
Ndifunga ukuba ndiyibonile ukuba ifundisa njani ngokuya kuseto> ulwazi nge-IPHONE 3.1.3 nge-baseband 05.12.01 kwaye yamenza ukuba abe yiJailbreak
Kwenzeka ntoni ukuba ividiyo icinyiwe kwaye ngoku ndiyakrokrela ukuba ibiyi-3G okanye i-3G kodwa kwisihloko sevidiyo ibisithi ii-3G
UMNTU UYAZI Nantoni na malunga nokuduma kwezulu0rm? KWI-BASEBAND 05.12.01? NGABA YINYANISO OKANYE OLUNYE UXOKI? KUCELWA UKUYIVALEKILE
Indoda indiphosela impazamo kwindawo evulayo xa ndikhetha enye engentla kwe-iphone 3g indixelela oku: «blacksn0w ayixhaswanga ngo-3.1.3! Ukuba unayo i-50.11.07 baseband 3.1.2, hlala apho! IGeoHot ayiyihlaziyanga kwi-CommCenter entsha! » Yintoni??? ndincede pliss = S
Molo uBerllin, ndine-iPhone 3G 16GB ayikho semthethweni, ndiyivuselele ngempazamo ku-3.1.3 baseband 5.12 kwaye ngoku indivumela ukuba nditsalele umnxeba ngokungxamisekileyo, ndiyazibuza ukuba ingaba ndingayisebenzisa na njenge-ipod? Kwaye ukuba yindlela endinokukwenza ngayo oko. ngokubhekisele
Mholweni. Ndine 3gs 16gb, 3.1.2. I-Blackra1n, ndiyenzile inethiwekhi, kwaye i-iPhone icinyiwe. Yenza i-blackrain kodwa oku kuqalisa kuphela kwaye kuqalise kwakhona akuyivuli iphone. le ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. yintoni enokwenziwa?
Ngexesha lesiphoso kufuneka usebenzise i-IREB:
Inye kuphela into onokuyenza ukuyikhuphela kwi-AppStore
ye-iphone yakho akukho meko
Unokwazi kuphela, kuba bekufuneka igcinwe ngokukodwa.
Uninzi lwamaqhinga luyavela.
Ungazihoyi zonke ezo zinto de iiBlogs ezibalulekileyo okanye amaqela aziwayo azise kuwe njengenyaniso.
Akucaci kwaphela, nokuba yayiyintoni na kwaye ayinakuyenza.
Kodwa i-DevTeam ibonakala sele ikufutshane.
Kodwa andazi ngokuqinisekileyo ukuba uza kuyenza
I-iTunes iya kukunyanzela ukuba ubeke i-firmware 3.1.3 kuyo
Ndenza i-jailbreack kodwa ndihleli kwinyathelo "Iwindow iya kuvela ukukhangela ifayile ekhutshelweyo, ikhethiwe kwaye ukubuyiselwa kuqala." umbuzo wam ngulo: yeyiphi ifayile endifanele ukuyibeka?
Ndilindele impendulo kwaye ndiyabulela kakhulu ngayo yonke into
Njengesiqhelo ndicinga ukuba ndibandakanyekile, ndihlaziye umthetho 3.1.3, ndenze i-firmware yesiko, ndingenile kwimodi ye-dfu, ndinenguqulo yamva nje ye-itunes, kwaye inika impazamo xa ndizama ukuyifaka .
Kubonakala kum ukuba bekungafanelekanga ukuba kunyukele kumthetho 3.1.3 ngaphambili… akunjalo?
I-3G movistar 3.1.3 ngaphandle kokuqhekeka kwejele
Molo Berllin mvakwemini, ndine-iphone 3g 8gb inguqulelo 3.1.3 (7e18) firmware 05.12.01 is from movistar is not released, I never did anything to it, what can I do to download the cidya? Can I use this new Inkqubo yenguqulo yam? Uxolo andixhomekekanga kwisifundo, imibuliso….
kunye ne-iphone 3gs ene-iboot entsha enokwenziwa ????
IBerlin uyayazi into entsha sn0wbreeze ??
I-iphone 3gs 3.1.2 yam isebenze ngokugqibeleleyo, i-JB nge-blackra1n kwaye ivulwe nge-ultrasn0w kude kube lusuku olunye xa ivumelanisa ifowuni iye yawa, yabonisa iapile, emva koko yagqwetha kwaye yaqala kwakhona ... ukulandela imiyalelo kunye nemiyalelo yakho ndiqale ukuyibuyisela ifowuni kodwa ngoku i-iTunes iyandinyanzela ukuba ndihlaziye… ndizamile yonke into, ireb, ukufaka kwakhona i-libusb, i-blackra1n, i-snowbreeze, ukwehla kwisitokhwe esingu-3.1.2, ukwehlisela kwisiko 3.1.2, ukunyusela kwisitokhwe 3.1.3, ukunyusela isiko 3.1.3 kunye akukho nto !!! Ndihlala ndinempazamo 1611 kwaye andikwazi ukubuyisela…. kwimizamo yam yokugqibela ndizifumene iimpazamo ezili-1600 kunye ne-1603 ... umntu angandinceda ukulungisa iimpazamo ezili-16xx xa uhlaziya, ukuze ubuncinci ndisebenzise ipod ngelixa ndilinde ukuvulwa !!!!
vula iphone sitsho
UJairo kunye nenkampani, izolo ndichithe iiyure ndizama ukususa i-damn 3,1,3 ...
Soloko impazamo ibuyisela ...
Ingxaki yam yayiyi-itunes, ndibeka ingxelo yamva nje, ndaphinda ndayiqala kwakhona ndayibuyisela ku-3,1,3, ndaza ndaphula i-3g yam nge-redsn0w 0.9.4 ndisebenzisa i-l firm 3.1.2 d backup
Phendula Diego Iphone
I-iphone yam isimahla efektri kwaye ndifuna ukubeka uhlaziyo olusemthethweni 3.1.3 kuyo
Into endifuna ukuyazi kukuba ngaba i-jailbreak inokwenziwa kamva.
Ke yintoni ekufuneka yenziwe ukwenza umsebenzi we-iPhone ongasebenziyo kuhlaziyo ukuya ku-3.1.3 ???
ULeonnardo Lara sitsho
molweni nonke ... kulungile ndinayo iphone 3gs 16gb ... kunye nohlaziyo lobuyatha ku-firmware 3.1.3 kwi-itunes ...
Phendula kuLeonnardo Lara
Kulungile ukuba ndiyiphosile i-boot loader eyi-6.4 kwaye inguqulelo ye-baseband yi-05.12.01 ahy indlela yokuyivula?
@ Diego iphone
Enkosi ngempendulo yakho ... baseband, le fuzzyband kwi-cydia yokwenza ukwehla ... kodwa ngelishwa, kwimeko yam, i-ireb ayihambelani ne-3gs kwaye andinakho ukuqhubela phambili ngaphaya kwempazamo ye-16xx, ii-3gs zam zinamathele kwiscreen kunye ne-logo ye-itunes kunye ne-usb Intambo ... enkosi kwakhona ngempendulo yakho
Molo Jairo, unyanisile, ndine-3g kwaye «ilula»,
ngee-3gs zakho ubambekile de kube kuphuma into kwifemu yakho.
Ngapha koko, ukuba ngu-3gs ndicinga ukuba ayikuvumeli ukuba ubuyisele okanye
Inkampani esemthethweni kufuneka uyise kwivenkile esekho phantsi kwewaranti.
IBerllin !!! Bukela oku
Itheyibhile yokwazi ukuba iintlobo ezahlukeneyo ze-iphone zinokuthi ziboshwe okanye zivulwe.
kunye nemibuzo embalwa
Ndingazi njani ukuba yintoni endiyenzayo? (isifundo esingentla asisebenzi kum)
Ukuba unayo i-Iboot entsha, uyenza njani iDowngrade 3.1.2 nge-SHSH?
Iphone 3Gs OS 3.1.3 MC, Firmware okanye baseband 05.12.01
Kwaye iWindows Xp sp3
MKA!!! kunye ne-Itunes 9
Uxolo khange ndiqaphele ukuba uyihlaziyile
Ndiza kuzama ke iF0recast
Molo uBerllin ndingathanda ukukubuza izinto ezimbalwa xa une-ratillo Ndine-3g enenguqulo 3.1 kunye ne-baseband 4.26 kwaye andazi ukuba yintoni enye.Zeziphi ezinye iindlela endinokuzihlaziya? Ndisebenzisa i-ultrasnow Ndibeka i-3.1, njenge-3.0, kunye ne-CF yakho. Enkosi kakhulu kwangaphambili ^ ^
Ndine-3g ye-iPhone ene-3.1.2 yokuqhekeka kwejele nge-blackra1n (ndisebenzisa kuphela i-jailbreak kunye nomqhubi osemthethweni) kwaye ndingathanda ukuvuselela ku-3.1.3 nge-Sn0wbreeze kwaye ndiyikhulule ukuyisebenzisa nomnye umsebenzisi, umbuzo ngowuphi Ndingayikhulula! kuba iyakuba nefirm 3.1.3 kunye ne-baseband 5.11.07?
ukuqhekeka kwentolongo: ewe (njalo)
Ngaba umntu angandixelela ukuba kuthetha ntoni oku ukuba ndingayikhupha i-iphone 3g firmware 3.1.3 baseband 05.12.01, ukuze ndikwazi ukufaka i-cyria okanye kwangaphambili ndibulele kakhulu impendulo ephuthumayo
iperile galindo sitsho
AAHHH NDIDINGA UNCEDO !!
Ndine IPHONE YAM 3GS !!!
KUNYE 3.1.3 !!!
KUNYE NDIFUNA UKUZISA ICYDIA KUWE !!
NDANDISENAYO I-SN0W KWIDESKI YAM KANYE NE-TMB FAMMWARE
KODWA NGOMZUZU WOKUKUNIKA UKUKHANGELA EKHWENZINI, I-OSEA FIRMWARE AYIBONAKALI KUM, NGOKUBA AYIKHO IFOMU EFANELEKILEYO, NDIYICOMBILE YONKE NDINCEDE.
Phendula u-perla galindo
Ifayile ofuna ukuyikhuphela
Ukuba ufuna iJailbreak kuphela:
I-3.1.3 ayizisi nafda kwi-iphone
Hlala ne-3-1-2 kwaye upase iBlacksn0w ukuyikhulula
Sele ikuxelela: ayinakuvuleka: HAYI
IBrawuza yakho itshintshe ulwandiso lwe-ipsw.
Kuya kufuneka utshintshe ulwandiso olufake kwifayile ukusuka kwi "ZIP okanye kwiRAR" ukuya kwi-Ipsw
Ndine-3G ye-32gb Iphone 3.1.2G, endiyithengileyo kwinyanga ephelileyo, yeza nohlobo XNUMX, kwaye ndayaphula ndaza ndayikhupha nge-blackrain.
Ewe, ngenye imini yabambeka, ndayicima, kwaye xa ndigqithisa i-blackrain ndabuyela kuyo, ihlala nobuso beGeoHot ngonaphakade, emva koko imananita iyavela, izama kwakhona ukwenza ubumnyama, kwaye kwakhona iManzanita, eli lonke ixesha.
Andikayihlaziya ibe ngu-3.1.3 okwangoku. Ndingenza ntoni ???
Imibulelo emininzi!!! Nguwuphi umonde onawo wokunceda wonke umntu, ndiyayixabisa.
I-PS: Andikwazi luguqulelo lwe-baseband yam, kuba uqikelelo aluyiboni ifowuni yam (ihlala ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo xa ndiyivula, njengesiqhelo nge-blackrain kunye ne-botloader entsha), kwaye andiyigcinanga ifayile yam kwiiseva zeCydia ECID.
Molo, iphone yam ineentsuku ezi-3 ubudala, oko kukuthi, yonke into ihlaziyiwe kwinqanaba lokukhetha ii-3gs, ayindivumeli ukuba ndenze nantoni na, ndifumana ulwazi kwescreen ngento evela kwi-basebad endiyenzileyo
Kukuzama amaxesha amaninzi ukubona ukuba iyakhaba kwakhona.
Yibeke kwimodi ye-DFU kwaye udlulise iBlacra1n ukubona ukuba iyakubamba na
Kungenzeka, iphone yakho ayinakuyenza.
Ukhe wayijonga ngaphambili:
Enkosi ngempendulo uBerllin.
Inye kuphela into yokuba andinakukubeka kwimowudi ye-DFU kuba indibeka ngokuzenzekelayo kwimowudi xa ndiqala kwaye kwi-Itunes ndifumana umyalezo wokuba i-iPhone ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ukuba andinakuyiqala, yeyiphi enye indlela endinokuthi ndibenakho ukuyibuyisela kwaye ndiyikhulule ????
UJuan Carlos sitsho
Ndithenge i-iphone 3gs movistar, kodwa bendisisidenge ukuyivuselela e-itune, ndicinga ukuba xa ndisenza njalo kufuneka ndilinde ukukhutshwa kwe-firmware entsha. Ngubani onokundinceda ngalonto ????? Ndifuna ukwazi ukuba ndingavula na okanye ndigqibe ukukwazi ukufaka i-cydia ukuze ndenze izicelo zasimahla…. Ukubulisa, masincedeni ukuba yenziwe njani, ndimtsha kwi-iphone …….
Molo ndine-iphone 3G ene-firmware 3.1.3 (7E18) kunye ne-baseband yayo ingu-05.12.01. Yintoni endinokuyenza?
I-iphone 3gs 32G, inguqulelo 3.1.3 (7E18), i-firmware 05.12.01, ngaphandle kwedatha engenileyo okwangoku.
EBerlin, ngaba ucebisa ngokufudukela ku-3.1.2, ngaphambi kokuqhekeka kwejele?
Ngenye i-iphone 3G 16G, inguqulelo 3.1.2 (7D11), i-firmware 05.11.07, andikaze ndibenangxaki neblacra1n kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Ndingaluhlaziya njani uguqulelo 3.1.2 ukusuka ku-3.1.3?
Enkosi kwangaphambili ngemizamo yakho kunye noncedo lwakho ...
molo nge-iphone 32gb 3.1.3 ungenza okufanayo? simahla
molo iphone yam imbi 88942L5Q3NR, BASEBAND: 05.12.01, BOOT; 6.4
IMODEL MC133 Firmware 3.1.3 ndingayenza into kwaye nceda njani?
dinalcyf@yahoo.com ……………ndibulela kakhulu
UBerllin, kwimeko yam, nokuba kwenzeka ntoni kwi-blackrain, andinakuyiqala kwakhona ifowuni.
Ndinayo ngo-3.1.2, ukuba nayo ngaphandle kokulayishwa kwebaseband andinayo enye indlela?
Oko kukuthi, ngokubeka isiko eli-3.1.3 kuyo, ndingayikhulula na ngokungalayishwa i-baseband?
Okanye ndibeka isiko lika-3.1.3 kwaye ekuphela kwento engenako ukuyikhupha kodwa ukuba ndiyenzile nge-jailbreak?
molo, kwimeko yam ujonge into endibeka kuyo:
I-Jailbrek: kuphela ukuba i-SHSH igcinwe
Oko kuthetha ntoni? Ndinomdla kuphela kwi-cydia, andifuni ukumkhulula. Ndilinde impendulo. kubonga
UJoseph Ruben sitsho
Ndifuna ukuvalelwa ejele ngokulandela onke amanyathelo kodwa ndinayo i-baseband 05.12.01 kwaye ayizukundivumela ukuba ndiqhubeke nenkqubo, ngaba unaso isifundo sokwaphula le modeli? Ndingayivuyela kakhulu.
ukuqhekeka kwentolongo? njalo
oku koko kwaphuma kwingqikelelo
Phendula ujose ruben
http://www.blueplastic.net/liberar-la-baseband-05-12-01-del-firmware-3-1-3-exploit-encontrado/comment-page-1/#comment-1546 ……… .. BONA YIYO NGOKUQHELEKILEYO NGUJOSE RUBEN
Andazi ukuba kunokwenziwa:
Ndine-3gs ye-iphone 3.1.3 i-k inokucima nge-blackrain (ngaphambi kokuba ibe nakho) ...
Ityala kukuba ekuphela kwendlela yokwenza ukwehliswa kukugcinwa kwe-ssh kodwa andiyigcinanga…. Into endifuna ukuyazi kukuba xa ubuyisela ikopi yogcino lwe-iPhone, ukuba ndiyigcinile, ingathotyelwa kwi-3.1.2 ???
ukuba kunjalo, ungandidlulisela ikopi ...
Phendula ku ramiro
Uxolo ngokungachazeki kakuhle XD
UBerllin ngaphambi kokuba bonke bathi uyintanda kwaye ndingathanda ukukubuza uncedo. Izolo andazi ukuba kwenzeke ntoni kum, ndihlaziye iphone ukuba ibe ngu-3.1.3. (Ndine-3GS) kwaye yaqala kwakhona kwaye ngoku andinakuyitshixa. Andidlulisi ikhebula lesikrini kunye ne-itunes kwaye ukuba ndizama ukubuyisela kwaye indinika impazamo eyi-1604 (kwaye ndizame i-usb eyahlukileyo) ukuba ndizama ukubuyisela nge-ipsw yoqobo engu-3.1.3 kuxa indinika impazamo leyo ( 1604), ukuba ndizama ukubeka u-3.1.2 Ndifumana ukuba ayihambelani, kwaye ukuba ndizama ukubuyisela ngokulula ndifumana impazamo eyi-1604, ndingenza ntoni?
Ungandixelela ukuba ndingayisebenzisa le jailbreak kwi-iphone yam
I-3Gs 3.1.3 (7E18) Imodeli MC 131 KS ????
Kudala ndilindile ukusukela ngoJanuwari kwaye andazi ukuba le ndlela uyivezayo apha iyacetyiswa?
Enkosi ngentsebenziswano yakho ebalulekileyo!
ulungile, umbuzo osileyo; Ewe ndinayo i-iphone 3Gs 3.1.3 (7E18) MC 158Y imodeli ye-movistar kon kontrato nayo yonke le intanethi ye-3g, xa kusenziwa i-jailbreak, ndisenayo i-intanethi ye-3g nayo yonke into eqhelekileyo ikomo ngaphambili, ndinje uphume uzuze ekubeni ndingazifaka zonke iintlobo zezicelo ezivela kwi-iTunes? ukungazi oku akuyi kundivumela ndilale T_T xdddd ndicinga ukuba ngumbuzo opholileyo lowo…. enkosi; D
Nceda, umntu angandixelela ukuba ndiyikhuphelela phi ikhephu? Ndityhafile !!, enkosi T_T
Ndiyazi phi, khange ndithethe nto, enkosi xD
Enkosi ngazo zonke ezoncedo ezishiya isohlwayo.
Ndine-iPhone endicinga ukuba yi-2G kodwa andazi, kwaye kwinyathelo lesi-6 xa ukhetha i-firmware 3.1.3 ayiniki ithuba lokuvula ngokungathi ayifumananga fayile ifunekayo (ngokucacileyo, ayenzi nika ithuba lokuvula nantoni na) kwaye ukusukela apho andizukuya. Kuza kwenzeka ntoni. Ndiqale ukuvuselela kwaye abahlobo baqala ukundilibala kuba i-iPhone yam ibhubhile emhlabeni.
Ndingasivuyela isandla esincinci sokundikhupha kwaba bodwa.
Ingxaki yam iyafana nengxelo enye kaSergio.
Ndine-3GS endiyithengileyo ngoJanuwari kwivenkile ye-movistar kwaye ndakhululwa. Iza nohlobo 3.1.2. Ndenze i-jailbreak nge-blackrain kungekho ngxaki. Bekufuneka nditshintshe icard ndelinye elihamba nalo xa ndibuyela kwi iphone belingenanto !!! (kutheni?!?!?!), yandicela ukuba ndiyibuyisele. Isidenge kum ndiyenzile kwaye yahlaziywa yaya ku-3.1.3. Ngoku isebenza ngokugqibeleleyo njengefowuni kodwa andazi ukuba ndenze njani i-JB. Andazi ukuba ndinantoni endinayo (kwaye andinabuganga bokulandela isifundo ukuba ingandinika iingxaki othetha ngazo) kwaye andikhumbuli ukuba ndiyigcinile i-ECID eCydia. Ndingayazi njani lonto ?? Ukuba andiqondanga kakuhle kwizimvo zakho, ithemba lam linye kukuba ndiyayigcina ndikwazi ukwehla ndiye ku-3.1.2 ... .. NJANI?
Nceda, nceda! Kwaye gcinani engqondweni ukuba ndimtsha kwaye andiqhelanga kwesi sigama….
Ndinengxaki kukuba i-2G yam ayikhuphi nasiphi na isandi xa inditsalela umnxeba kwaye ikwimo enqunyanyisiweyo, ukuba ndichukumisa isitshixo sikhupha isandi ngoko, okanye ukuba ndiyasisebenzisa .. Enkosi !! 1
kunye neearcila sitsho
Ngaba umntu angandixelela ukuba ndiyazi njani ukuba i-iPhone 3G yam ivuliwe okanye ayivulwanga, kwaye ndazi njani ukuba iyamsebenzisa okanye ayisebenzisi umthengisi osemthethweni we-iPhone.
Phendula u-andres arcila
Uyabona, ndinengxaki, xa ndikhuphela ikhonkco le-firmware 3.1.3` ye-3g, ndifumana ifolda egcwele ezinye iifolda ezingaziwayo kunye neefayile, kodwa akukho nanye .ipsw engenayo i-Sn0wbreeze engenakufumana i-firmware. gwenxa?
IVAN Ngena kule khonkco http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/ KUNYE NOKUNOKUKHUPHELA I-FIRMWARE 3.1.3 UKUBA UNEENGXAKI, KHUPHELA 3.1.2
Ndiyabulela kakhulu i-HUGO, kodwa ukusuka apho ndiyikhuphele kunye nebali elifanayo, yi-zip enezinto ezininzi kodwa akukho nto kwaphela nge .ipsw.Ndiza kuzama nge-3.1.2 kodwa andazi ukuba i-Sn0wBreeze izakusebenza nayo….
Isonjululwe, kwifayile ye .zip kuya kufuneka utshintshe ulwandiso lube .ipsw yiyo ke leyo.
Kodwa i-Sn0wBreeze ayiyamkeli le fayile njengendawo esebenzayo .ipsw kwaye ndilapho mna.
Ndine-iphone 3g ene-firmware 3.1.3 kwaye le bhulorho ayisebenzi kum nge-snowbreeze 1.5.2. Ndikhe ndahlala kwi-IReb ukuze iimpazamo ezinje nge-16xx zenzeke kodwa kube kukho umyalezo othi, »ingxaki yenzekile (2)», umyalezo awungowombhalo kodwa uyafana kwaye enyanisweni kubonakala ngathi ndiza ukuqhubeka nokulinda i-redsnow ukukhupha i-jailbrake.
Iya kuba luncedo kakhulu ukuba uyayazi ukuba yeyiphi ingxaki enokwenzeka ngale jailbrake ye-iphone 3g kwaye ungandinika ukukhanya kwento endinokuyenza.
Isifundo siyaxatyiswa kunjalo-
UPaulo uthi ndlela ntle
Ndifuna ukwazi ukuba ungayivula na ibhendi yenguqulo ye-16 GB ye-iPhone 3.1.3 e-Ecuador, nceda, ukuba umntu uyazi ngale nto, ndixelele, enkosi
Molo, jonga ukuba ndithenge i-iphone evuliwe kwi-3g ye-8g nangaphandle kobuyatha ndiyivuselele nge-itunes kodwa andinayo idatha evela kwi-iphone ethi baseband inayo ukuba ndiyifakile i-firmware 3.1.3 kwaye akukho nto ayenziyo ndivulele yona Yishiye njengefektri andazi ukuba ndenzeni sele ndizamile iinkqubo ezininzi kodwa ayivuleki aaa ndine-sim-t yeselfowuni ndingayivuyela, ndincede
Besele ndihlaziyiwe kuhlobo 3.1.3 kodwa i-iPhone 3g yam ayisabambi opharetha kunye netyhubhu k yebarlo kwi-conpania de telcel ak bazoyilungisa kodwa bacime yonke into kwaye andinayo i-cidia kwaye ndifuna ukubona indlela yokubeka cydia kodwa ayichaphazeli i-welva ok leyo ngxaki ye-k ayimfumani umsebenzisi wayo (i-iphone 3g yam sele ikho nge-jeailbreack kwaye sele inesiginali se-telcel)
molo kulungile ndizamile ukuyenza kodwa ndizifumana ezi leta,
Ingqele ekhephu ibhaqe ukuba esi sixhobo asinakuqhekeka ngenxa yokubethwa likhephu ngaphandle kokuba sele sophukile.
ukuba iphone 3g ine-bootrom ehlaziyiweyo.
emva koko awunakusebenzisa umoya obandayo
kwaye ndilandele amanyathelo kodwa andiyifumani, ndingenza ntoni?
Ndine-iPhone 3G s
Ubusuku obuhle uBerllin onombuzo, qaphela ukuba ngoku ndinayo i-iPhone 3G, qaphela ukuba izisa u-3.1.3, kunye ne-Cydia kodwa qaphela ukuba kwindawo ye-Wi-Fi kubonakala ngathi ayisebenzi ithi ayikho i-Wi-Fi kwaye kulwazi ivela kwi-Wi-Fi N / A ndingenza ntoni ????
Ndine-3gs 16gb ye-iphone ene-firmware 3.1.3, imodeli ye-7E18 ye-MC ayinakwenza i-jalibreak? Ndiwenza onke amanyathelo kodwa xa ndibuyisela kunye ne-firmware eyenziwe yi-snowbreeze indinika impazamo: S: S enkosi kakhulu
Ndiyaqonda ukuba yimodeli eyi-3.1.3 MC ayinakwenziwa.
Ndine-ipod touch kwezi nkcukacha, undiphikise ukuba ndiphosakele kwaye ukuba inokuqhekezwa entolongweni ngesi sikhokelo.
Ndisandula ukufumana i-iphone evela kuMovistar kwaye ndingathanda ukufaka izinto ezincinci. Umzekelo i-cydia ukuze ikwazi ukufaka iinkqubo zam.
Ingxaki kukuba, andinalwazi. Ndingenza ntoni?.
Ndine-iPhone 3G inguqulelo 3.1.3 (7E18) evela kwi-Movistar nge-modem firmware ye-05.12.01.
Oko bendifunda kwaye kubonakala ngathi ayinakukhutshwa, nangona andikhathali, kuba ndivela kwimistist, njengeselula enye. Nangona kunjalo, ungayenza le nto yokufaka i-jailbreak ukuyifaka i-cydya?.
Enkosi ngeempendulo zakho! : 3
Inceda njani. Uqikelelo luthi kum:
Isixhobo sokukhuphela: 5.9
Jailbrekable: EWE (Zonke iindlela)
Molweni nonke. Ngaba ukhona umntu onokundinceda? Ngenisa useto, buyisela kwaye ukhethe ukucima umxholo kunye noseto. Ngoku i-iPhone yam ifriziwe kwi-apile encinci kwaye inkwenkwezi encinci iyayichukumisa. Inje ngolu hlobo lweentsuku ezi-2 kwaye ngaphezulu kokuqalisa kwakhona okanye ukubeka kwi-DFU andinakukubuyisa. Ndenze ntoni? Nceda u-Berllin nceda
IMiguel AVP sitsho
Molo ndine-3gs 3.1.3 BB 5.12.01.
Ngaba ungayenza iJailBreak? okanye ayikaphumi.
Phendula uMiguel AVP
molo ndine-3gs iphone ehlaziyiweyo ibe ngu-3.1.3 ngo-5.12..01 ndingenza into enkosi kwii-imeyile zam drhyh@msn.com
Molo eBerlin, njengePol ndifumana isilumkiso ...
Molo, ndinengxaki nge-iTunes (9.0), xa ndifuna ukubuyisela i-firmware kwaye ndicinezela ishifti + ukubuyisela, ndibuyisela ngokuthe ngqo ifayile esemthethweni ka-Apple kwaye ayizukundivumela ndikhethe le ndiyikhupheleyo.
Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela
Molo, ndenza umbuzo. Ndithenge i-3Gb 32GS kwiArgentina yaseArgentina. Ine-firmware 3.1.3 (7E18), iyimodeli MC133LE kwaye i-firmware yemodem yi-05.12.01. Ukunyaniseka ndidiniwe kukukhangela kwaye andafumana nto, kwaye ndenza inkani ndazama ukuvavanya kwaye akukho nto, iyandisebenzela kodwa bendifuna ukwenza i-jailbreak ukuze ndikwazi ukukhuphela i-cydia kunye ne-bullshit.
Phendula uF Fabricio
Molo ngokuhlwa kubo bonke abo bane-Iphone 3G inkqubo enokukunceda ufake i-cydia yi-redsnow yile hyperlink https://www.actualidadiphone.com/2010/02/05/tutorial-jailbreak-con-redsn0w-0-9-4/ , oku kunokukunceda ukuba kuyasebenza kodwa ukwenza kuphela i-jailbrake ukuba ingakhululi, enokukhutshwa yi-iPhone 2G, kodwa le kuphela kwayo endincedileyo ukufaka i-Cydia kunye nokwenza i-jailbrake, i-iPhone yam yi-3G 3.1.3 .5.12.01 kunye ne-baseband XNUMX nayiphi na imibuzo endinokukunceda ngayo ukuba undithumelele i-imeyile ku gerson.valdez@yahoo.com
Kananjalo nakuphi na ukuthandabuza kule hyperlink kucacile ukuba ungayifaka njani i-redsnow, https://www.actualidadiphone.com/2010/02/05/tutorial-jailbreak-con-redsn0w-0-9-
Ndiyabulisa eBerllin !!!
Ndingathanda ukukubuza umbuzo ukuba ayisiyongxaki na kwaye ndilandele amanyathelo kwaye xa indinika ithuba lokusika i-Iphone 3g okanye ii-3gs uphawu oluya kuthi «blacksn0w ayihambelani ne-fireware 3.1.3 eqhuba 05.11.07 baseband ngenxa yendlela blacksn0w amagwegwe ahamba ngayo. ukuba usebenzisa i-blacksn0w, kucetyiswa KAKHULU ukuba uhlale kwi-3.1.2! » Andiqondi kakhulu ukuba ungaba nobubele, ungandichazela ukuba yintoni ingxaki endinayo okanye ndenza into embi.
Mholweni!! Ngaba umntu angandixelela ukuba ndenze ntoni xa ndine-3gs ene-firmware 3.1.3 kunye ne-baseband 05.11. Ndiyivulile kuba ndinayo nge-chip yoqobo kodwa andikwazi ukufaka i-cydia yokwenza i-jailbreak.
Nceda ukuba umntu owaziyo angandinceda ...
matias, ezintsha sitsho
molo ndinemodeli ye-iphone 3g ye-MB 759Y inguqulelo 3.1.3 kunye ne-firmware 05.12.01. kwaye isihloko silandelayo. Ndiyazi ukuba andinakuyikhupha kwinkampani, umba kukusebenzisa uhlobo lwe-ipod kodwa ndikwazi ukulayisha imidlalo kunye nabanye ngelixa ndilinde isisombululo sokubeka i-chip yam ngokucacileyo. Ndamdlulisa kwi sn0wbreze v1.5.2 ndaye ndafaka i cydia. Umbuzo ngulo: NGABA NDINGAKHO UKUFAKA UKUFAKA IMIDLALO NEZINTO? NDINGAZI NJANI UKUBA IJELE YENZIWE? NOKUBA NDIFUMANA NJANI IBHOOTLOADER MIO ukubona ukuba ngu-5.08 okanye u-5.09 kwaye ndikwazi ukuyikhupha. Ndiyifaka njani imidlalo ekhutshwe kwi-intanethi efana neLabyrinth? Enkosi kwaye ndilinde ingcebiso kuba bendikhona iintsuku eziyi-3 kwaye ngalo lonke ixesha ndizilahleka ngakumbi !!!!!
Phendula kwimatias, newbie
Ndine-iPhone 3G ngempazamo, kufuneka ndiyibuyisele kwi-iTunes kwaye ngoku ndikwi-3.1.3 ndiyikhuphele umoya obandayo kwaye emva kokwenza yonke into, Impazamo engu-1604 iyavela, bandixelele ukuba ndikhuphele u-Ireb kwaye emva kokufaka oku kuya kwenza Ingandivumela ukuba ndifake i-.spw costum, kodwa ukumakisha i-3G ku-Ireb akukho nto yenzekayo, isikrini esimhlophe kufuneka siphume okanye enye into, kodwa akukho nto ... ndingenza ntoni?
Imeyile yam nydiatorres@gmail.com
Ndiya kuluvuyela naluphi na uncedo
Xa ndigqibile ukwenza i-jailbrake kwaye ndifaka i-sim khadi yam, ayisebenzi, iibhendi azikavulwa emva kwayo yonke le nkqubo, ndiqhubeka njani nokuyisebenzisa?
Awukhange ufikelele kwikhonkco leposti yam yangaphambili
Inkqubo oyifunayo ngumoya.exe
ngayo ungavalela kodwa ungavuli umsebenzisi
yenza ikopi yeefoto kuba xa uqhuba inkqubo ye-lasd iyacima
kwaye nje ngokufaka umoya kunye ne-ifone edityanisiweyo ...
Yonke into ilayishiwe emva koko ndine-cyntia kwimenyu ye-ifone ????
esq ngaphambi kokuba ndiyenze ndingathanda ukuqiniseka ... Andihlali ndinethamsanqa kwezi zinto hehe.
Umbuzo wokugqibela ...
ukwenza backup ????
Ngaba izinto zam okanye isoftware yefowuni igciniwe ????
Ngenxa yokuba ndinayo entsha kwaye andikabeki nto okwangoku, ukuba andiyidingi.
Enkosi kakhulu ngayo yonke into endizakuyizama emva kokusebenza kwaye ndiyakuxelela ukuba kanjani.
vumelanisa kuqala ne-itunes ukuze ube nekopi yogcino lwenkqubo yangoku, ukope iifoto kwi-pc
uqala i-spirit.exe kunye ne-cydia ivela kwiscreen se-iphone
emva koko ujonga iiforamu ze-cydia kwaye ucoba into enokwenziwa yi-iphone yakho
molo wenas jonga ndilandela amanyathelo akho kwaye ndifumana impazamo nge-1600 andazi ukuba kuthetha ntoni nceda undincede ndilinde impendulo yakho
UJulio Velez sitsho
Molo mzalwana wam, ndilandele amanyathelo kwaye kwi-STEP 9 ayindivumeli ukuba ndikhethe i-backsnow kuba ndine-iphone 3g baseband 05.12.01 itsho into ngesiNgesi endingayiqondiyo jaa kodwa yingxaki yam leyo: baseband, NDINGAWAKHUSELA NJANI IBASEBAND AMIGAZO? Ikhonkco okanye uluvo olulula luya kuwa ngam, Enkosi.
Phendula uJulio Velez
UJulio Velez kule meko i-baseband inokukhutshelwa kunye nesicelo esibizwa ngokuba yi-cydia fuzzyband kodwa ixabisa inyani, sele ine-5.09 bootloader, inokuba kuphela ne-5.08 bootloader, kodwa kule meko ndincoma ukuphinda (https://www.actualidadiphone.com/2010/02/05/tutorial-jailbreak-con-redsn0w-0-9-4/comment-page-6/#comment-122844) ngale inshurensi ungayibrake iphone kodwa ungayikhuphi.
Molo mhlobo. Ndine-3gs version 3.1.3 kunye nemodem 5.12.01 kwaye indixelela ngaphandle kwenkonzo, ngaba ikhona indlela yokwenza into? Ndiyabulela kwangoko
Molo ndihlaziye i-iphone 3g 8gb kwi-fimware 3.1.3 kwaye ndihlaziye imowudi ukuya kwi-05.12.01- andazi ukuba ndingaphinde ndiyikhuphele njani nceda ndincede meeeeeeeeeeeee andinakukwazi ukuyibetha njengoko ndenza njalo nceda rrrrr ndincede meeeeeeeeeeeeeeeee umntu achaze ntoni Ndingayenza. !!!! imeyile yam yile sergio_baires11@hotmail.com Ndiyayixabisa yonke into enokubanceda
molo, keria ukwazi ukuba i-jailbrake ingenziwa na kwi-iphone 3gs baseband 5.12.1 kunye ne-mc 158.eske imodeli bendiyifunda kodwa khange icace kum. Kuya kwenzeka ntoni ukuba awukwazi? Ngaba unokuyibuyisela? okanye ibiza kuvalwa? Umbuliso . Enkosi.
Kwenzeka into efanayo kum ukuba i-sergio inokundinceda nge-imeyile yam capirucho32@hotmail.com
jonga kumagqabantshintshi amadala ngalaa mhla we-9 nowe-10 kaMeyi
Ndinengxaki, ipc yam ayindiboni, iphone yam ifumana umyalezo wokuba isixhobo esixhunyiwe sinengxaki kwaye i-iphone ayinakunxibelelana ne-pc, emva koko ndangena kwincwadi yokubhalela enewindows 7 ndifumana umyalezo ofanayo, kuphela indixelela impazamo kwisixhobo esingaziwayo kwaye andazi ukuba kuthetha ntoni oku ndifuna nje uncedo oluncinci ngoku kon andinakwenza nantoni na ukungena kwi-iTunes ngaphambili enkosi ngoncedo onokuthi undinike lona
Phendula u lokurajim
I-berllin ndinengxaki i-pc yam ayindiboni iphone yam iphuma umyalezo wokuba isixhobo esixhunyiwe sinengxaki kwaye iphone ayinakunxibelelana ne-pc, emva koko ndingene kwincwadi yokubhalela enewindows 7 ndifumana umyalezo ofanayo k kuphela undixelela impazamo kwisixhobo esingaziwayo kwaye andazi ukuba kuthetha ntoni oku, ndifuna nje uncedo oluncinci, ngoku andinakwenza nto ukuze ndingene kwi-itunes kwangaphambili, enkosi ngoncedo onokundinika lona
Molo ndiyathemba ukuba ungandinceda ndikhuphele yonke into oyithethayo ukuba iyafuneka kodwa xa ukhangela ifayile ye-firmware le nkqubo ayamkeli nayiphi na ifayile ehambelanayo eyenzekayo kukuba sele iphelelwe lixesha.
Enkosi ngempendulo yakho
Jonga ndiwenza onke amanyathelo de kube kubuyiswa kwaye xa sele ilungiselela ukuyenza, indixelela ukuba ayinakubuyiselwa kuba impazamo (1604) yenzekile.
Ndingayenza njani nge-iod touch ye-1g?
Ngaba lukhona uhlobo lwengozi?
Molo, nyathela ngenyathelo ngutitshala wakho. kodwa ndiqhubeka ndifumana impazamo 1604
Ungayichaza kanjani Jonathan kumazwe ahlukeneyo neelwimi? sitsho
Kwimeko yokuqala ndiyavuyisana nawe ngezifundo ozilayishayo, zinomdla kakhulu.
Ndiya kumbuzo wam:
Ndine-iphone 3g enale mpawu ilandelayo:
Inguqulelo: 3.1.3. (7E18)
Imodeli yeFirmwre: 05.12.01
Yeyiphi inkqubo ekhuselekileyo oyicebisayo ukuba uyenze ukuze ukwazi ukubakho kwiJailbreak (Oko kukuthi, ukufaka iCydia kunye / okanye iDwala).
Ndiyakuxelela ukuba iphone yam ikhutshwe efektri.
Kuba uYona = dlulisa kuye uMoya.exe
Molweni zihlobo, jonga, ndinepod touch 8 gb enenguqulo ye-hack 3.1.3 (7E18) yemodeli MC010Y5665J, kulungile, ulwazi oluninzi.
into endiyifunayo luncedo! kuba i-cydia yam ayivuli: (umhlobo uye waqhekeza kwaye ayizange ivuleke) ke xa ndizama ukuyivula iyaphazamiseka
Ke sele ndizamile ngenkqubo ye-ClearCydiaListCache.zip kwaye andifumenanga myalezo ungenakwenzeka
Awuwenzi la manyathelo ngokuchanekileyo
uyenza ngendlela engalunganga ukuze abantu baxoke
Kukho i-chima kwaye sele isebenza i-youtube kunye neemephu ezingakhange zisebenze kwi-firmware endiyipapashayo graxxxxxxxxxxxxxxxxx parce
Molo, ndiyibuyisile eyam i-iPhone eyonakeleyo nge-iPhone 3g 16gb ukuya kwi-fimware 3.1.3 kunye nemowudi eya ku-05.12.01- andazi ukuba ndingaphinde ndiyikhuphele njani kwaye andikwazi nokuyiphila.Ndicela njani, umntu uchaza into endinokuyenza., imeyile yam yile caston_achigan@yahoo.es
Ndiyaluxabisa lonke uncedo olunokubakho.
INKQUBO YENZIWA KWISIM CARD KWAKANYE OKANYE ????????
AKUSEBENZI. I-iTunes IYAQHUBEKA UKUXELELA NJENGOKO KULANDELAYO, NDIQAPHELA:
«Kubonakala ngathi i-SIM efakwe kule iPhone ayixhaswanga. Kuphela ngamakhadi e-SIM avela kumsebenzisi ohambelana nawo anokusetyenziswa ukwenza i-iPhone isebenze Faka ikhadi leSIM elize ne-iPhone yakho okanye undwendwele indawo yentengiso yesixhobo esisebenzayo ukutshintsha iSIM khadi. »
Lo myalezo uyafana ukusukela phezolo bendivela kwi-iTunes xa ndizama ukuhlaziya i-firmware kunye ne-SIM ebendinayo ikhuselwe yi-PIN khowudi.
NDINGENZA NTONI NGOKU?
USrgio Soto Valverde sitsho
Molo, ndine-3gs ye-iphone ene-baseband 05.11.07 kwaye ndiyivuselele kwisoftware 3.1.3, kwaye ndifuna in & t chip yaseArgentina, kuba ukuba ndiyivula kuphela, isebenza njenge-ipod kwaye isebenze ngeselula ndifuna it & t chip. Kwaye bendifuna ukwazi ukuba ndingayivula njani kwaye ndingayifumana njani i-chip evela eArgentina. Graxxxxxx…. Nceda urfente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XD
Phendula uSrgio Soto Valverde
Uxolo ndikhuphele yonke into kodwa ikhephu elindibuzayo lifuna i-firmware kwi .ipsw ulwandiso kwaye ukhuphelo luyiZip ndiyayivula kwaye ziifolda ze-ai kuphela kunye nokunye, kufuneka ndenze ntoni ukuze ios ibuyele kwi-Ipsw okanye into enjalo , Ndixelele Nceda
@WwaLlasS ithiye igama lefayile .. tshintsha ulwandiso ukusuka .zip ukuya kwi .ipsw
ahhh ndifumana impazamo ngelixa ndibuyisela "iphone ayinakubuyiselwa. Impazamo engaziwayo yenzekile (1604), D: yintoni ifart?
Ndifumana impazamo 1604
inkwenkwe engathandabuzekiyo, ngaba sifuna i-iphone yethu ukuba ibe kwi-firmware 3.1.3 okanye 3.1.2?
tb yam indinika impazamo !!!
Molo mhlobo ndingathanda ukwazi ukuba ungayihlaziya na i-iPhone 2g ene-firmware 3.0 kwaye ube nakho ukuyivuselela ngokuthe ngqo ku-3.1.3? imibuliso nceda ngokukhawuleza
eh ilandelwe inyathelo ah yonke into yenzekile kodwa ixesha lokuhlaziya iphone 2g ayindivumeli ndibone umfanekiso kwaye ihlaziywa ngokuthe ngqo neyoqobo njengoko ndilayisha sn0wbreeze_iPhone 2G ekwi-desktop
UIvan R sitsho
Homer kufuneka ucinezele iqhosha lokubuyisela kunye ne-SHIFT iqhosha licinezelwe.
Phendula u-Ivan R
ANDIQONDI UKUBA UNGAPHENDULI KUMNTU NGEZIPHOSO ZE-1600 NO-1604.
ngokufanayo noSebastian, ndine-iphone2g ene-firmware 3.0 kwaye ndifuna ukuhlaziya kule meko ukuya ku-3.1.3, ngaba kunokwenzeka i-100% ngala manyathelo njengoko kuchaziwe?
Andifuni ngcaciso, ewe-ewe- okanye -no-
Umzalwana we-Epa ndenze yonke into kodwa sendisele ndingenako ukuma andazi ukuba ndingayenza njani ngalo lonke ixesha ndiyenza le nto indixelela ngoluhlobo KUKHANGELA UKUBA IKHADI LESIM SIMI EFAKWE KULO IPHONE ALISADLWANISEKI KWAYE LENZIWE YONKE INTO KANYE NALUTHO ..!: SI NDITHATHE INYANGA KULO .. !!
Uhlaziyo 74 sitsho
Ndine-iPhone 3G evela kumzi-mveliso ene-3.1 .3 kunye ne-firmware 5.12.01 enokwenza i-jailbreak
Phendula kuRevolver 74
Ndinengxaki ... ndine-ipod eyi-1g kwaye xa ndigqiba ukwenza yonke into ihlala ikwimo yokubuyisa kwaye ayisaphumi apho kwakhona ... kufuneka ndiyibuyisele kwakhona! Nantsi imeyile yam, naluphi na uncedo luya kuthakazelelwa ngokupheleleyo
Kutheni ungabaphenduli abo bakuxelela ukuba inika impazamo, nam ndifumana impazamo enkulu 1604 Ndilinde impendulo
Olle iTunes ayibuyisi i-iPod yam kuba iyanceda nceda!
Heyi kwinyathelo le-14 iqala ukulayisha yonke into ilungile kodwa kancinci phambi kokuba iphakathi indixelele ukuba kukho impazamo, ngoba?
Ukuvavanya iMacetoHuerto, isicelo esimangalisayo